Alahady Archives - FJKM Amparibe Famonjena
Catégorie : Alahady
Rafitra misy ireo alahady rehetra
“MANDRESY NY FAHAFATESANA NY TOMPO”
Alahady I manaraka ny Paska
Ivom-bokatra sady ivon’ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 65 taonan’ny
Sampana Tanora Kristiana Zokiny (STK Zo)
« mba ho tanteraka ny olon’Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin’ny asa tsara rehetra.« 2 Timoty 3:17
Alahady miavaka ity alahady ity satria ivom-bokatra ary koa fankalazan’ny Sampana Tanora Kristiana Zokiny an’Andriamanitra noho ny taon-jobily. Nahatratra 65 taona ny STK Zo. Ny Teny Faneva amin’izany dia noraisiny tao amin’ny 2 Timoty 3:17 « mba ho tanteraka ny olon’Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin’ny asa tsara rehetra.«
Alahady volalohany manaraka ny Paska sady koa alahady farany amin’ny volana aprily, mamarana ny fibanjinana ny lohahevitra eto amin’ny sahan’ny FJKM, hoe : “Mandresy ny fahafatesana ny Tompo.”, ary alahady nitondrana amim-bavaka ny Asa TOPAZA.
Razafindramboa Vololoniaina, Filohan’ny Sampana Tanora Kristiana Zokiny, no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina misotro ronono, Rabehatonona James, Filoha maharitra tao amin’ny Fifohazana Foibe, no nitory ny Tenin’Andriamanitra.
Ny litorjia fahatelo no narahina.
Nisy ny fivoriana ankatoky ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo taorian’ ny fanompoam-pivavahana. Azonao henoina ato ny hafatra.
Feon-javamaneno teo am-pidirana, ary rehefa vita ny Fiarahabana Apostolika dia novakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 96 :7-13, ho fiderana an’Andriamanitra.
Rehefa izany dia nasandratra ho fiderana ny hira FFPM 171 : 1 – 3 “Jeso Mpanjaka malaza”.
Dera no natolotra an’Andriamanitra, fisaorana noho ny fahatanterahan’ny herinandrom-bokatra sy ny faha 65 taonan’ny Sampana Tanora Kristiana Zokiny. Nangataka ny Fanahy Masina, ny hahazo hery sy hitombo finoana.
Natao ho fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra izao fotoana izao.
Razafindratsima Lalaina, mpampianatra ao amin’ny K1 no nitondra ny fotoana.
Ny Teny araka ny Ohabolana 1:10: » Anaka, raha taomin’ny mpanota ianao, aza manaiky” no noraisiny nitondrany ny fampianarana.
Nivavaka izy teo am-piandohana, nametraka ny fotoana eo am-pelantanan’i Jesoa.
Tantaran’i Lita sy Soa, zaza niaraka notinaiza izy mianadahy, samy mpianatra Sekoly Alahady, mpinamana tsy mifankafoy, saingy samy hafa ny toetra. I Soa tia mianatra Sekoly Alahady sy milamina. I Lita kosa be setrasetra, tia adiady, tsy mifantoka amin’ny fianarana Sekoly Alahady. Nandeha ary niaraka nividy zavatra izy mianadahy. Diso famerim-bola ilay mpivarotra dia faly Lita, ka nandeha nitsoaka haingana niaraka tamin’ny vola. Naka vola tsy an’ny tena ka aiza haveriko, hoy Soa, fa tsy sitrapon’Andriamanitra ny maka vola tsy an’ny tena. Izany no fampianarana azon-dry zareo.
Ny hafatra : Ny zanak’Andriamanitra dia manao ny sitrapon’Andriamanitra mba tsy ho voatarika amin’ny ratsy. Mila mifantoka amin’ny fampianarana. Mila mandray an’i Jesoa marina.
Nasaina nitsangana ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady ary ny rehetra namerina ny Teny: “Anaka, raha taomin’ny mpanota ianao, aza manaiky”.
Taorian’izany dia natao ny hira FFPM 452:1 “Tompo ô, ovay ny foko”, nofaranan’ny mpitarika tamin’ny vavaka.
Mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia niarahan’ny mpianakavin’ny finoana nohiraina ny FFPM 226 “Tompo ô, mba te hihaona”.
Ireo mpikambana ao amin’ny STK Zo no tompon’anjara nivavaka sy namaky ny Soratra Masina. Razafindramamba Andry no nanao ny vavaka mialoha ny vakiteny ary Andriambeloson Tifanny sy Rabarijaona Diamondra no namaky ny Teny voalahatra.
Ny Perikopa : Ohabolana 10:1-12 ; Jaona 20:26- 31 ; 2 Timoty 1: 6-12.
Teo am-pitsanganana no niarahan’ny Fiangonana ny FFPM 205:1-2 “Ny Teninao rehetra” mialoha ny toriteny.
Niarahaba ny Fiangonana, niarahaba ny Sampana Tanora Kristiana Zokiny ny Mpitandrina Rabehatonona James. Nanao Fijoroana vavolombelona mialoha ny nitondrany ny hafatra. Misy fahagagana betsaka, hoy izy, eto amintsika FJKM nefa tsy tabatabaina. Misy ny fitsanganana amin’ny maty.
Izaho, hoy izy, tsy mba nahalala aretina izany, fa betsaka ny “accidents” efa nahazo ahy. In-dimy. Lazainy ho fanomezam-pahasoavana. Mpanoratra boky izy. 91 no isan’ny boky efa navoakany. Amin’ny alina izy no tena manoratra ka fotoana fohy dia fohy no hatoriany. Ny antoandro no matory anaty fiara, avion, sambo…
Ny loza nahazo azy farany dia nandeha nampanao “recyclage” tany Antsohihy. Tena voa mafy, tsy nantenaina ho velona intsony. Nandritra ny 8 volana tsy afaka niteny, tsy nitsangana, tsy afa-nipetraka … nefa tsy masaka ny lamosina. Nandritra izany dia nieritreritra lalina sy nanoratra : inona no mahatonga ny aretina ? no mahatonga ho tsy afaka aretina ? Nanoratra boky tantara 5 mn ho an’ny Sekoly Alahady… Nahazo valim-bavaka izy, avy tamin’ny Fiangonana, Fifohazana… Raha nivoaka ny hopitaly dia, hoy ny mpitsabo, hoe mandeha “chaise roulante” mandrakizay, nefa herinandro fotsiny taty aoriana dia afaka nandeha sy niteny. Aza mijery fahagagana atsy sy ary, hoy izy, fa ato amin’ny FJKM dia misy fahagagana.
Rehefa izay, dia noraisiny ny Teny Fanevan’ ny Tanora Zokiny, nitondrany ny hafatra.
II Tim. 3 :17: « mba ho tanteraka ny olon’Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin’ny asa tsara rehetra.«
Raha mba hatao toy ny hiakan’ny SAMPATI moa ?
Rehefa miantso hoe “Tanora Zokiny !” dia ny valiny telo : “Tanora Zokiny !” Vonona ! ; “Tanora Zokiny !” Tanteraka ! ; “Tanora Zokiny !” Miasa tsara !
Ny olon’Andriamanitra dia tanteraka, vonona sy miasa tsara.
Fiainantsika amin’ny fotoana rehetra izany Teny izany, amin’ny Asa fanompoana tanterahintsika.
Tanteraka : io no antsoin’ny teolojianina hoe “radicalité de l’Evangile”. Tsy maintsy tanteraka ianao. Izany no antom-pahavelomantsika: ny hanao ny olona ho tanteraka.
“Mission” ny Fiangonana.
Rehefa te ho tanteraka ianao na hahatonga olona ho tanteraka dia ataovy izay hampihaonana azy amin’i Kristy. Izany no manamboatra ny fiainantsika iray manontolo. Izay hahatonga ny olona ho amin’ny fibebahana.
Ny fibebahana dia hoe :
-Miova Andriamanitra no dikany. Manaiky ilay Andriamanitra velona;
-Manitsy ny filàna eo amin’ny fiainana satria nomen’Andriamanitra Fanahy mahery ianao hanitsy ilay filàna ao aminao;
-Manao an’i Jesoa Kristy ho ambony indrindra (priorité) eo amin’ny fiainana;
-Manongotra ny tsy izy ary mamboly ny vaovao (ny asan’ny Fanahy, ny sitrapon’Andriamanitra, soatoavina tovozina amin’ny Tenin’i Jesoa Kristy).
Vonona tsara (prévoyant)
Vonona na inona na inona trangan-javatra dia zakanao, tantinao.
Ahoana no hahatonga ny olona ho vonona tsara, manana antoka (assurance), manana fahatoniana (paix) ?
Ambolena ny fahavononana hiatrika ny zavatra rehetra. Izay fahavononana izay no takian’Andriamanitra. Ety an-tany no hahitanareo fahoriana, hoy Jesoa. Ary mbola misy zavatra tsy ampoizina eto, fa avelao hitranga izay hitranga, avelao ho avy izay ho avy. Ny fanananao fiombonam-piainana amin’i Jesoa no hananao fahavononana ary io no hanananao fahatoniana sy filaminana.
Fotokevitry ny protestanta “réformé” dia hoe : Miasa tsara, miasa mafy. Mikendry ny voninahitr’Andriamanitra, miasa ho an’Andriamanitra.
Ny Teny ao amin’ny Apokalypsy izay fampiasa indrindra rehefa misy manjo dia hoe “Sambatra ny maty, dia izay maty ao amin’ny Tompo hatramin’izao, fa hitsahatra amin’izay nisasarany izy ; fa ny asany manaraka azy.” Misy vokany andrasan’Andriamanitra aminao.
Ny finoana tsy misy tantarany, fa ny asa misy.
Ry Tanora Zokiny ! Misaotra an’Andriamanitra noho ny asan’ny Fanahy. Nanomezanareo ny Fiangonana ho fijoroana vavolombelona ity Teny Faneva ity.
Ry Tanora Zokiny ! Tanteraka tsara, vonona tsara, miasa tsara
Isika rehetra, satria olon’Andriamanitra isika, ny asantsika dia ny hitaona ny olona ho amin’ny fahatanterahana, hitaona ny olona ho amin’ny fahavononana, hitaona ny olona handray andraikitra hiasa tsara. Amin’izany rehetra izany ho faly aminao ny Tompo ary hiteny aminao izy hoe: “ry mpanompo tsara sady mahatoky ; nahatoky tamin’ny kely ianao, dia hotendreko ho mpanapaka ny be ; midìra amin’ny fifalian’ny tomponao.”
Ho an’Andriamanitra ny voninahitra. Amen.
Feon-javamaneno fohy taorian’ny toriteny ary nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika. Nifona satria tsy nanatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra. Menatra satria ny fahendren’ny maha olona no nentina nanaovana ny Asa. Misaotra anefa fa mamela hibebaka ny Tompo. Ny ran’i Jesoa no hanadio ary hanome ny fanahin’ny fahendrena. Mangataka mba ho olona vonona hanao ny Asa tsara rehetra.
Taorian’ny vavaka dia natao ny hira FFPM 445 : 3 : “Jesoa mora fo indrindra” ary rehefa izany dia natolotra ny Teny famelankeloka.
Izao no Teny famelankeloka avy amin’ny Tompo, noraisin’ny Fiangonana:
Jeremia 31 :3: Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao.
Zakaria 3 :4: Indro, efa nesoriko ny helokao, ary hampiakanjoiko akanjo fihaingoana ianao.
II Korintiana 5:21: Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarinan’Andriamanitra ao Aminy kosa isika.
Natao ny hira FFPM 547:1 “Ry Jesoa Masoandronay.”
Nanambara ny finoany tamin’ny fanononana ny Fanekempinoana faha 4 ny Fiangonana.
Nipetraka nanao vavaka mangina tao anaty feo-javamaneno.
Rahajanirina Michelle, Mpitantsoratry ny STKZo, no nanatanteraka izany.
Nisaotra ny Tompo izy noho ny faha 65 taonan’ny STK Zo sy ny herinandrom-bokatra.
Nanao tsiahy fohy mahakasika ny 65 taona.
Ny Teny Fanevan’ny Sampana hatramin’izay ka hatramin’izao dia ny Romana 12:11 “Mazotoa, fa aza malaina, ary aoka hafana fo amin’ny fanompoana ny Tompo”.
Nanao ny tatitry ny Asa aprily 2021 hatramin’ny aprily 2022.
Nanentana ny hidiran’ny mpikambana vaovao.
Rehefa vita ny tatitra dia nitsangana nanao ny hira «Andriamanitra ! He mahagaga»
ny mpikambana rehetra.
– 01 mey : Rindin-kira ao amin’ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana, manomboka amin’ny 2ora 30, ho famaranana ny faha 45 taona naha mpamorokira an’Atoa RAKOTONIRINA Jean de Dieu. Ny RINDRAMPEO ( Hosana Ambohijatovo , Kerobima Ankatso , KT Ambatovinaky, Ny Koraita Manarintsoa ary ny Ampifitia Isotry Fitiavana ) no hanatanteraka izany.
– 07 mey : vavaka ho an’ny firenena noho ny faha 40 taona ny SAFIF Foibe. Tontolo andro ao Antsonjobe .
– TPM Ambatonankanga : Mangataka tolotanana ireo mpiomana ho mpitandrina taona faha V andiany SAHY ho fanampiana azy ireo amin’ny famoahana ho mpitandrina amin’ny volana Jolay . Misy ny valopy fandraisana anjara amin’izany azo raisina ao amin’ny biraon’ny Fiangonana
– Toa ny mahazatra ny fotoanan’ny Sampana mandritry ny herinandro
– Nivahiny teto amintsika ny FJKM Iombivato ary nivarotra mangahazo au caramel anaty “barquette” ho fanampiana azy ireo amin’ny ezaka adidy
– 30 aprily : hetsika “tontolo andro kolontsaina sy fialamboly” eny amin’ny Kolejy Pault Minault Androhibe, karakarain’ny Komity faha 20 taona naha talen’ny trano famoaham-boky ANTSO an’Atoa Ramahaleo Zo.
Nisaotra an’Andriamanitra noho ity fotoana ity.
Nisaotra ny Birao sy ny komity 65 taona ary nitsodrano azy ireo.
Nisaotra ny Mpitandrina misotro ronono, Rabehatonona James, izay Filoha maharitra tao amin’ny Fifohazana Foibe.
Ny Biraom-piangonana Razafindrabe John Bam no namaky ireo voady sy raki-pisaorana.
Ny hiran’ny RFF “ Ianao no heriko” ; HAFA “ Entre tes mains” ; ny hira FF39:2 ; FF 3:1 sy ny Antema 16 no nangatahin’ireo nanao voady sy raki-pisaorana.
Ny hira FFPM 275:1 “ Raisonao, ry Tompo soa” no notanterahina ho fanolorana ny rakitra.
Natao ny hira FF 39:2 “Faniriako”.
Ny Asa Vavolombelona notanterahin’ny Fiangonana dia ny sakramentan’ny Batisa ho an’ny zaza Ratiarison Isaia Joris Edgar.
Nanatanteraka ny anjara ny Rindra Fanatanjahantena sy Fialamboly (RFF), tamin’ny alalan’ny hira: “Holy, Holy, Holy”.
Nisaotra an’Andriamanitra nanome ny finoana fa mandresy ny fahafatesana.
Nisaotra noho ny ivom-bokatry ny STK Zo sy ny fankalazana an’ Andriamanitra noho ny faha 65 taonan’ny Sampana.
Nisaotra satria nahazo hafatra lehibe sy iraka ho tanteraka sy vonona ka hiasa tsara. Nivavaka ho an’ny Fiangonana, Mpitondra Fiangonana, mpitory Filazantsara, toby masina, akany fitaizana. Nahatsiaro koa ny foibe FJKM, nitondra tamim-bavaka ny Synodamparitany rehetra. Nametraka eo am-pelantanan’ny Tompo ny zanaka am-pielezana eto an-toerana sy any ivelany. Nivavaka ho an’ny akany Topaza sy Tangaina. Nivavaka koa ho an’ny mpanompon’Andriamanitra nitondra ny hafatra sy ny ankohonany, nametraka azy eo am-pelantanan’ny Ray, mbola hahasoratra boky. Andriamanitra hitahy ny Birao sy komity ary ny mpanohana ny STKZo, hitari-dalana Izy Tompo mba ho Sampana mijoro. Mivavaka ho an’ireo SSAA ao anaty fankalazana sy ny fisotroandrononon’ny Mpitandrina. Mivavaka koa ho an’ny fiombonan’ny kristiana eto, miomana ho an’ny vokadehibe. Nahatsiaro ireo sahirana, ny tsy salama, ny mana-manjo, ny tratran’ny tsy fidiny ka voafonja, ny traboina tsy manan-kialofana, ny tratran’ny kere; izay tsy takatry ny vavaka hotsinjovina ary koa ireo manana hataka manokana. Nitondra tamim-bavaka manokana ireo nanao voady sy raki-pisaorana. Nofaranan’ny Mpitandrina tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany.
Natao ny hira FFPM 146:1 “Anao ny dera, ry Zanaky ny Ray”,
Notononina ny Tondrozotra 2022 .
ary ny Antema 16 no hira farany ary nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina ao am-po.
Nitendry orga : Irimanana Eninkaja, Rabiazamaholy Mahery
Nikirakira fafana : Rakotonarivo Vatsy
Nikirakira fanamafisam-peo : Ramahery Yves
ALAHADY 17 APRILY 2022 “MANDRESY NY FAHAFATESANA NY TOMPO” ALAHADIN’NY PASKA
» Fa isaorana anie Andriamanitra, Izay manome antsika ny fandresena amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tompontsika » IKorintiana 15:57-58
Fotoan-dehibe nankalazan’ny Mpino Kristiana ny Fandresen’ny Tompo androany alahady 17 aprily 2022. Ny lohahevitra banjinina sy mbola ifampitaizana eto amin’ny sahan’ny FJKM di any hoe “ Mandresy ny fahafatesana ny Tompo ”.
Andrianaivomanana Willy Johnson, Mpitandrina miana-draharaha, no nitarika ny fotoana. Ramatoa Raharijaona Bodo no nitari-bavaka mialoha ny vakiteny ary nanao ny vakiteny tao amin’ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao. Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina, no nitondra ny hafatry ny Tompo.
Ny IKorintiana 15:57 no Tenin’Andriamanitra nangalana ny toriteny. Ny litorjia amin’ny endriny voalohany no nanatanterahina izao fanompoam-pivavahana izao. Azonao henoina ato ny hafatra.
Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy ny fanolorana ary ny fiarahabana apostolika dia niroso tamin’ny fiderana sy ny fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra ny Fiangonana.
Novakiana teo am-pitsanganana ny Salamo 96:1-6: “ Mihirà fihiram-baovao ho an’i Jehovah; Mihirà ho an’i Jehovah ry tany rehetra. Mihirà ho an’i Jehovah, misaora ny anarany. Lazao isan’andro isan’andro ny famonjeny mahafaly. Ambarao any amin’ny jentilisa ny voninahiny, Ary any amin’ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehovah ka mendrika hoderaina indrindra, Sady mahatahotra fa ambonin’ny Andriamanitra rehetra. Fa ny andriamanitry ny firenena dia tsinontsinona; Fa Jehovah no nanao ny lanitra. Famirapiratana sy voninahitra no eo anatrehany; Hery sy fahatsaran-tarehy no ao amin’ny fitoerany masina.” Amen.
Noventesina ny hira FFPM 146:1-3 “Anao ny dera”.
Taorian’izay dia natao ny vavaka fisaorana noho ny nahafahan’ny mpianakavin’ny finoana nankalaza ny andro Paska 2022. Manompo Andriamanitra velona isika. Isaorana ihany koa ny Tompo noho ny nahafahana miara-miombom-bavaka satria roa taona misesy izao no tsy afaka niara-nankalaza izany andro Paska izany. Koa hira fiderana no nasandratra ary ny Firaisana latabatra amin’ny Tompo dia efa fandresena ho an’ ny mpino.
“ Fa izay rehetra naterak’Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao; ary ny fandresena izay enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika « . IJaona 5:4
Nohiraina ny FFPM 142:4-5 “Tafatsangana tokoa”. Taorian’ny vavaka fifonana, ny hira FF 20 “Jeso Fitiavana” no noredonina ary narahan’ny Teny famelan-keloka izay nataon’ny mpitarika.
“ Fa Izy nanendry ahy tamin’ny tanany ankavanana ka nanao hoe: Aza matahotra, Izaho no Voalohany sy Farany. Dia Ilay velona, efa maty Aho, nefa, indro, velona mandrakarizay mandrakizay sady manana ny fanalahidin’ny fahafatesana sy ny fiainan-tsy hita”. Apokalypsy 1:17b-18.
Natao ny hira FFPM 141:1 “Efa velona tokoa”, ary niarahana nanonona ny fanekem-pinoana laharana fahatelo. Nisy feon-javamaneno fohy tao anaty vavaka mangina.
Nohiraina ny FFPM 758:1: “ Tsarovy e! rankizy ” mialoha ny nitondran’ny mpampianatra K7 Raverombolamanana, ny hafatra fohy ho azy ireo. Ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Ohabolana 22:6: “ Zaro amin’ny làlana tokony alehany ny zaza, ka rehefa antitra aza izy, dia tsy hiala amin’izany. ” no nangalana ny hafatra fohy.
– Izao taonanareo izao rankizy sy tanora no tsara hizaranareo manao zavatra tsara.
– Ny ratsy tsy mila ampianarina fa tonga ho azy. Ny mianatra ny tsara no mila fotoana ela.
– Maniry ny ankizy sy ny tanora ho olom-banona ny mpanabe sy ny ray aman-dreny.
Tian’ny Tompo hamafisina amintsika amin’izao andro Paska izao ny hahatonga antsika ho tena mpandresy amin’izay endri-pahafatesana misy eo amin’ny fiainantsika. Antony lehibe mahatonga ny ray aman-dreny sy ny mpanabe tsy mikely aina mampianatra ny Tenin’Andriamanitra ny hahatonga anareo hino an’i Jesoa sy ho olom-banona araka an’Andriamanitra mandra-pahantitra anareo.
– Ny hoe “Zaro amin’ny lalana tokony alehany” eto dia izay lalana marina nosoritan’Andriamanitra fa tsy izay heverintsika ho marina akory. Ny lalana marina dia hahatonga anareo hino an’i Kristy. Ambaran’ny Tenin’Andriamanitra fa “ I Jesoa Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana ”.
Ho fehiny, tantara mahakasika an’i Mino, ankizivavy 9 taona, no entina amintsika. Efa nozarin’i Dada sy Neny manao fotoam-bavaka isan-kariva ao an-trano i Mino. I Dada sy Neny no manao ny vavaka fangatahana amin’ny farany. Tsy mbola nahatsiaro nandray valim-bavaka tamin’ny olana iray lehibe tao amin’ny an-tokantrano anefa izy ireo, na dia efa ela aza no nangataka izany tamin’ny Tompo. Nolazain’i Dada sy Neny tamin’i Mino izany, mba hataony antom-bavaka manokana izany olana efa nivavahana ela izany. Nahavariana fa afaka andro vitsy monja dia novalian’Andriamanitra mihoatra noho izay nangatahana ilay olana lehibe nentina tamim-bavaka. Ny ankizy sy ny tanora tokoa, rehefa zatra mivavaka sy mahery mivavaka dia henoin’i Jesoa manokana. Taty aoriana dia lasa dokotera mpitsabo sy mpitory Filazantsara nikoizana tamin’ny marary i Mino.
Na dia aorian’ny fahafatesana aza dia mbola hanomanan’i Jesoa fiainana izay rehetra mino Azy.
IKorintiana 15:58 “… miorena tsara, aza miova, ary mahefà be mandrakariva amin’ny asan’ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin’ny Tompo”.
o Fanatanterahana ny Voka-dehibe hataon’ny Fitandremana FJKM Amparibe Famonjena: Alahadin’ny Pentekosta.
o Herinandrom-bokatry ny STKZo, manomboka ny alatsinainy 18 aprily.
o Fivorian’ny Mpihevidraharaha: sabotsy 23 aprily, amin’ny 8ora maraina.
o Ankatoky ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo: alahady 24 aprily
o Sekoly alahady, K1 hatramin’ny K10, hanao fampianarana fivoahana an-tsaha ny sabotsy 23 aprily. Toerana: Antsofinondry. Fiaingana: 7ora30 eo amin’ny Sekoly Saint-Michel Amparibe.
o Sampana Laika, fivoriamben’ny sampana ny sabotsy 23 aprily amin’ny 10 ora, ao amin’ny Akany Rainimamonjy.
Nisy ny fifampiarahaban’ny mpianakavy ny finoana noho ny nahatratrarana ny Paska 2022, izay notarihin’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina. Tao amin’ny andinin-tSoratra Masina Romana 8:37: no nakana izany: “Mpandresy ao amin’i Kristy… iainantsika ry Amparibe Famonjena ”.
Salamo 8:1: “Jehovah Tomponay o, endrey ny voninahitry ny anaranao amin’ny tany rehetra, nataonao eny amin’ny lanitra ny voninahitrao”.
Hira voady nangatahana : RFF : Ampianaro – FF 32:3 : “Aza avela hahalala” – Mialoka Aminao – RFF : Ianao no heriko.
Noredonina ny hira fanolorana ny rakitra FFPM 432:2: “ Mandra-pihavin’ny Tompo mivavaha ”
Mialoha ny fankalazana ny tenin’Andriamanitra dia nohiraina ny hira FFPM 133: 1: “Efa namangy ny olony”. Nitondra amim-bavaka ny Soratra Masina sy nanao ny vakiteny, araka ny Perikopa androany, Ramatoa Raharijaona Bodo. Izany dia nalaina tao amin’ny Testamenta Taloha Isaia 25:1-9 sy Testamenta vaovao Jaona 20:1-10; IKorintiana 15:57-58.
Noredonina ny hira FFPM 164:1 “ Jesosy irery ihany ” .
Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina, no nitory ny Tenin’Andriamanitra.
Ny Teny nangalana ny hafatra, nandraisana izany fitaizam-panahy izany dia avy ao amin’ny Soratra Masina IKorintiana 15:54: “ Ny fahafatesana noresena ka levona”.
Hafatra roa no tsoahina ao anatin’io andinin-tSoratra Masina io:
Finoana azo antoka :
Ny teny “noresena” eto araka ny teny grika, dia azo adika ihany koa hoe : nongotana, natelina, lany, potika, ka tsy hita intsony. Toy ny biby kely natelin’ny biby lehibe noho izany ny fahafatesana.
Fanantenana mafy orina
Rehefa niseho tamin’ny mpianatra 11 lahy i Jesoa dia nanolotra sy nandray ny Fanahy Masina ireo mpianatra ireo. Velona ny fanantenana na dia efa saika niverina amin’ny asa sy ny fiainana andavanandrony aza ireo mpianatra ireo. Raha mpanohitra resy dia tsy nahita afitsoka intsony.
Voatelina ny fahafatesana, ny fahafatesana dia fahavalo goavana ary matahotra daholo ny zavaman’aina rehetra. Manomboka teo rehefa naseho ny sary hoe ny biby kely laniny biby lehibe dia natahotra daholo ny rehetra. Hoy ny tenin’ny Soratra Masina “Raha zanaka no hanafaka dia ho afaka tokoa ianareo”.
Isaia 25:8 “Hofoanany tsy hisy mandrakizay fahafatesana”. Raha tsy efa nitsangana ny Tompo dia tsy mino ny mpianatra. Ny fitsanganan’ny Tompo tamin’ny maty no fototry ny toriteny sy ny finoan’ny Kristianina. Maty maritiora daholo ireo Apostoly rehetra satria mafy ny fanenjehana. Matoa isika maharitra dia noho ny finoana.
Taorian’ny feon-javamaneno fohy dia nanao ny anjara hirany ny STK.
Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nanao ny vavaka fangatahana.
– Misaotra noho ny nahafahana niara- niombom-bavaka tamin’izao Paska 2022 izao.
– Mivavaka ho an’ireo toby masina, ireo akany fitaizana, ny isan-tokantrano, ny isam-pianakaviana ary ny faritra rehetra.
– Mivavaka ho an’ny Foibe FJKM, ny Filoha ary ny Birao miara-miasa, mba hahatanteraka ny asa.
– Mivavaka ho an’ny Synodamparitany rehetra ary indrindra ny Synodam-paritany andrefana.
– Mivavaka ho an’ny toerana Antananarivo renivohitra izay sehatra iasana, ho an’ny Kristiana rehetra, ny zanaka any am-pielezana na aiza na aiza misy azy ireo. Aza avelanao ho mpianatra manadino fa mahatsiaro ny iraka ataonay izahay, ry Tompo.
– Mivavaka ho an’ireo sahirana, ireo marary, ireo mana-manjo, ireo voafonja tsy fidiny, ireo tratran’ny kere, ireo traboina, ireo tsy manan-kialofana.
– Mivavaka ho an’ireo mpanompo mahatsiaro ny fahasoavanao ry Tompo, ireo saika tratran’ny loza ka narovanao tamin’ny sandrinao mahery ry Tompo.
Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany vavaka fangatahana izany.
Natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 128:1 “ Efa velona ny Tompo ” ary novakiana ny tondrozotra 2022. Natolotry ny Mpitandrina ny tsodrano. Ny andininy fahatelo amin’io hira io ihany no notohizana. Nipetraka ny Fiangonana nanao ny vavaka mangina, notononina ny Trinite masina.
Ho an’Andriamanitra irery anie ny voninahitra. Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.
Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina sy ny Mpitandrina miana-draharaha Andrianaivomanana Willy Johnson, no nitarika ny fanompoam-pivavahana nandritra ny Fandraisana.
Ireo hira natao:
Hira FF 39:1
FFPM 310: 1
Natao ny vavaka. Notantazana ny raki-pisaorana ary nangonina ny kapoaka.
« Fa na dia tsy manatrika anareo amin’ny nofo aza aho, dia manatrika anareo ihany amin’ny fanahy ka mifaly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsi-fiovan’ny finoanareo an’i Kristy. Koa tahaka ny nandraisanareo an’i Kristy Jesoa Tompo, dia mandehana ao aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin’ny finoana, toy ny efa nampianarana anareo, ka mazoto amin’ny fisaorana ». Kolosiana 2 :5-7
Mpitendry orga: Rabiazamaholy Mahery – Rabiazamaholy Hery Lanto
Nikirakira fafana: Randriamasimanana Andrinavalona
Nikirakira fanamafisam-peo : Rakotovololona Lova
Naka sary: Rabemananoro Jonathan
“ MANDRESY NY FAHAFATESANA NY TOMPO ”
Ivombokatry ny sampana Dorkasy
« Ary izany no nitsenan’ny vahoaka Azy, satria efa reny fa nanao izany famantarana izany Izy. » Jaona 12 : 18
Alahadin’ny Sampandrofia androany ary koa alahady ivombokatry ny Sampana Dorkasy eto amin’ny Fitandremana.
Ny lohahevitra banjinina eo amin’ny sahan’ny FJKM dia hoe « Mandresy ny fahafatesana ny Tompo ».
Ny Filohan’ny sampana Rakotonarivo Ramanantsoa Domoina no nitarika ny fotoana ary Ramatoa Raharijaona Bodo kosa no nitondra ny hafatra.
Ny litorjia endriny fahatelo no narahina. Azonao henoina ato ny hafatra.
Nisy feon-javamaneno fidirana. Rehefa izay, dia novakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 15 hoe : « Jehovah ô, iza no hitoetra ao amin’ny tabernakelinao? iza no honina ao an-tendrombohitrao masina?
Izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy, sady misaintsaina ny marina ny fony; Tsy manendrikendrika amin’ny lelany, sady tsy manisy ratsy ny sakaizany, ary tsy manao izay hahafa-baraka ny namany, Tsy manaja ny ratsy fanahy, fa manome voninahitra ny matahotra an’i Jehovah; tsy mivadika amin’ny fianianany, na dia maningotra ny tenany aza, Sady tsy mampihana ny volany, na mandray kolikoly hanameloka ny marina, izay mitandrina izany dia tsy mba hangozohozo mandrakizay». Amen.
Noredonina ny hira FFPM 151 : 1, 3 « Miakara miakara » natao tamin’ny feon’ny fifohazana ary nataon’ny mpitarika ny vavaka fisaorana izay narahana feon-javamaneno. Nitohy avy hatrany ny fotoana.
Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny kilasy fahafito, Randriamahefa Thierry, no nitarika izany. Niainga tao amin’ny bokin’ny Romana 8 : 28 “Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an’Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany rahateo”.
Tantara sy fanoharana no nentiny tamin’izany. Nisy tanora izay, hoy izy, izay tena sady mazoto amin’ny asa fitoriana no mazotoa amin’ny fianarana. Rehefa zoma hatramin’ny alatsinainy izy dia mandeha manao ny asa fitoriana ary rehefa talata hatramin’ny alakamisy kosa izy dia mianatra.
Indray andro, nirahin’ny Mpitandrina izy, toy ny mahazatra, manao ny asa fitoriana. Fanadinana izy any am-pianarana ny herinandro manaraka, ka tsy maintsy tonga maraina ny alatsinainy. Avy be nefa ny orana, ary tena tsy nisy fiara afaka nandeha mihitsy. Tsy afaka niatrika ny fanadinana izy noho izany, ka tsy nahazo ny mari-pankasitrahana hahafahana miatrika “stage”, izay tokony ho atao taorian’ny valim-panadinana.
Tena nalahelo izy ary nanapa-kevitra fa tsy handeha hanao ny asa fitoriana intsony, tsy nety tonga tany am-piangonana intsony.
Indray andro anefa, dia nisy olona iray tonga tao aminy hilaza vaovao. Nilaza io olona io fa niharan-doza ireo olona niara-nianatra taminy, izay nandeha nanao “stage” ka maty avokoa.
Tonga saina izy tamin’izany ary dia niverina nibebaka tamin’Andriamanitra. Izay hoy ilay mpitarika hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an’Andriamanitra.
Natsangana ny ankizy sy ny tanora nanao ny hira FFPM 787 : 4 “ ‘Zay mahakolokolo”. Nisy vavaka taorian’izany.
Nohiraina ny FFPM 205 : 4 “ Ny teninao rehetra ”. Razanarivelo Laure no nanao ny vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina ary Razafy Andrianaivo Michelle no nanatanteraka ny vakiteny. Samy mpikambana ao amin’ny Sampana Dorkasy ireo tompon’anjara ireo. Ny Perikopa : Isaia 26 : 1-11; Jaona 12 : 12-19 ; Romana 8 : 31-39.
Natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 314 : 4 “ Injany misy feo ” mialoha ny toriteny.
Alahadin’ny Sampandrofia ny andro anio. Ny Filazantsara araka ny Jaona 12 : 18 no nitondrana ny hafatra: “Ary izany koa no nitsenan’ny vahoaka Azy…”.
Ny hoe “Azy” dia soloina hoe Izy na i Jesoa.
Nanomboka nihasarotra ny fisehoan’i Jesoa teo amin’ny vahoaka satria misy ny fikasana hamono Azy.
Ity fiakarana any Jerosalema ity dia efa voasoratra hatry ny ela. Nomen’ny mpitoriteny lohateny moa ity anio ity, ka nataony hoe “Ny fitsenan’ny vahoaka an’i Jesoa Kristy”.
Misy hevitra roa no nitondrany sy nampitany ny hafatra :
– Nino ny famantarana nataon’i Jesoa Kristy ny vahoaka.
– Nanandratra an’i Jesoa Kristy ny vahoaka.
Nino ny famantarana nataon’i Jesoa Kristy ny vahoaka
Nisy ny fahagagana nataon’i Jesoa mitory ny maha Mesia Azy ary nisy ihany koa ny fahagagana fanafahana amin’ny geja mampahory eo amin’ny fiainana. Izany rehetra izany dia mitory ny fiainan-danitra izay mitondra fiadanana zato isan-jato.Noho ireo famantarana ireo, teraka ny fihetsiky ny vahoaka nampiseho ny finoana tao anatiny.
Tsy natahotra ireo vahoaka ireo : na dia nisy aza ny sakana dia nahofahofany ny lambany. Ny finoana tao anatiny dia tena zava-dehibe satria nanala ny tahotra tao aminy. Izany finoany izany no nitsenany ny Tompo.
Nahatoky ny fahefana nananan’i Jesoa ireo vahoaka ireo : resy lahatra ireo ny amin’ny maha Mpamonjy an’i Jesoa Kristy.
Ho antsika amin’izao vaninandro izao dia ny ao amin’ny Romana 8 : 35; 38; 39 no fihetsika tokony hananantsika. Tsy tokony hisaraka amin’Andriamanitra isika, na inona na inona zavatra manjo sy mitranga.
Raha manana finoana ianao dia manana hery sy fahefana. Raiso izany finoana izany hoy ny mpitoriteny. Raha efa manana ianao dia ampitomboy. Hafa mihitsy izany finoana kristiana izany. Nanentana ireo Dorkasy ny mpitoriteny mba hanamafy izany finoana izany. Anisan’ny asa ataon’ny Dorkasy ny famangiana ireo vehivavy voafonja. Ny finoana ao anatiny no manosika sy manampy azy ireo amin’ny fanatanterahana izany.
Maro ny endrika azo hanehoana izany finoana izany hoy ny mpitoriteny.
2. Nanandratra an’i Jesoa Kristy ny vahoaka
Ny hoe fanandratana indray dia hoe fampiakarana ambony ary fankasitrahana. Rehefa nitondra zava-dehibe teo amin’ny fiainan’ny olona iray ianao dia ankasitrahany, omeny voninahitra. Matetika mpanjaka no omena izany.
Misy antony roa no nahatonga ny vahoaka hanandratra Azy.
Noraisiny ho toy ny mpanjaka lehibe Jesoa. Jesoa izay tonga hanafaka amin’ny fanjanahana. Ny finoana dia efa tao anatin’ireo vahoaka ireo.
Ilay hiaka nataon’ireo olona ireo hoe “HOSANA” dia fiantsoana fanavotana. Miantso vonjy ireo satria nanana fanantenana.
Ampandrosoy eo amin’ny tantaran’ny fiainantsika Andriamanitra. Mahereza, hoy ny mpitondra ny hafatra. Izany no fihetsiky ny olona taloha, fa mba ahoana kosa ny adidiko sy ny adidinao amin’izao?
Efa nandresy ny fahafatesana ny Tompo. Reseo ny endrim-pahafatesana eo amin’ny fiainantsika amin’ny alalan’ny fampandrosoana an’i Jesoa.
Aza miraviravy tanana, mandraisa andraikitra. Mila fibebahana eo anatrehan’Andriamanitra izao fotoana izao.
Filazantsara manova tantara, hoy isika FJKM. Herinandro masina isika izao, tongava manatrika ny fotoana ary manatreha alim-bavaka. Tano ny finoanao ary hamafiso izany.
Rehefa izay, dia nanatontosa ny vavaka setrin’ny Tenin’ Andriamanitra sy fifonana ny mpitarika.
Nisaotra noho ny Tenin’Andriamanitra. Nangataka ny Tompo mba hitari-dalana. Noho ny tsy fahatanterahan’ny anatra dia nahatsiaro menatra. Nangataka ny Tompo izy mba hahatanteraka izay andrasan’ny Tompo amin’ireo kristiana.
Natao ny hira FFPM 310 : 2 “Misy maro ao an-tsaha mitaraina” mialoha ny nanambarana ny famelan-keloka. Nalaina tao amin’ny Ezra 9 : 6-15 ny famelankelona nolazain’ny mpitarika.
Natao ny hira FFPM 36 : 1 “Moa ho haiko tantaraina” taorian’izany.
Niaraka nanonona ny fanekem-pinoana laharana faharoa ny mpianakavin’ny finoana ho fanavaozana indray izany finoana izany.
TATITR’ASAN’NY SAMPANA DORKASY
Nanao tatitry ny asa ny mpitantsoratra Radimiarilalao Eléonie. Anisan’ny voalazany tamin’izany ireto manaraka ireto :
Ara-panahy : Fandalinana ny Soratra Masina; fotoam-bavaka talata; fiofanan’ny tomponandraikitra; lasy tselatra; fotoana zoma hariva sy ny alatsinainy.
Asa vavolombelona : famangiana zokiolona sy “crèche” ao amin’ny Faculté de théologie – fanampiana ny Pasteur aumônier sy ireo vehivavy voafonja – famangiana sy fanampiana ny Toeram-Panomanana Mpitandrina ( TPM ) Ambatondrazaka.
Fifandraisana : nanao ny fivoriambe voalohany.
Fanatrehana ny fiainam-piangonana toy ny vokadehibe, ny Herinandron’ny Fanahy Masina; ny trano atsimo.
Nisy moa ny hafatra avy amin’ny Foibe izay novakiana ihany koa.
Ny Mpitantsoratry amin’ny Biraom-Piangonana Rakotomanana Andrimbazotiana no namaky ny vaovao.
Anisan’ny voalaza tamin’ny raharaha ireto manaraka ireto :
Ny Fikambanana Mpampiely Baiboly dia hanatanteraka lasy any Mantasoa ny 06 hatramin’ny 08 mey 2022. Ny fandraisana anjara dia 50 000 Ar.
Ireo mpiomana ho Mpitandrina dia mangataka tolo-tanana amin’ny fikarakarana ny fivoahan’izy ireo.
Nisy ny Batisa sy asa fampaherezana taorian’ny fotoam-pivavahana.
Nanomboka amin’ny 3 ora anio ny Herinandro masina, izay niarahana amin’ny sampana Sekoly Alahady; Hanomboka amin’ny 6ora15 foana kosa izany manomboka amin’ny alatsinainy.
Hiditra amin’ny 8 ora sy 30 minitra ny fotoana amin’ny Alahady Paska 17 aprily.
Nanao fanentanana ny solontenan’ny Firaisan’ny sampana momba ny amin’ny alim-bavaka ny Zoma masina. Nanomboka ny antsam-panahy ny antokom-pihira Hasin’ny famonjena tamin’ny 6 ora sy 15 minitra ary hotohizana amin’ny Alim-pandresena, manomboka amin’ny 8 ora sy 30 minitra. Niara-nijoro teny anoloana avokoa ny Biraon’ny Firaisan’ny sampana.
Nandray fitenenana ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina niarahaba ny Fiangonana, nisaotra ny tompon’anjara, niarahaba ny Dorkasy ary nanentana indrindra ny amin’ny Andro Paska.
Ny Biraom-piangonana Razafindrabe John Bam no namaky ny voady. Ny FFPM 172 : 3 “Hoderaiko lalandava” sy ny FFPM 515 : 3 “Tsara lova, ry Jesoa” no hira voady nangatahin’ireo mpianakavin’ny finoana.
Zaza mianadahy roa no natolotry ny ray aman-dreniny ho amin’ny Sakramentan’ny Batisa : Raharinirina Camille Vanona sy Raharinirina Aro Mael.
Natao ny hira FFPM 248 : 2 « Nitondra ny zaza » ary nandroso ny fianakaviana mba hahatanteraka izany.
Rehefa vita izany dia nanao ny anjara hirany ny STAF « Raha re ».
Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika ny vavaka fangataham-pitahiana.
Nivavaka izy ho an’ireo mpitondra Fiangonana, hahay sy hiomana amin’ny fitsenana an’i Kristy; ireo toby masina, ireo akany fitaizana mba hahay hitodi-doha amin’Andriamanitra ary hahay hitsena an’Andriamanitra eo amin’ny fiainany. Nivavaka izy ho an’ireo tomponandraikitra SPAA, izay tarihin’ny Filoha synodaly; ho an’ireo mpandraharaha; ho an’ny ARM mba hiroborobo amin’ny asa fitoriana; ho an’ny asan’ny Fiangonana izay nentina amim-bavaka mba handroso, hahefa. Nentina amim-bavaka ny Herinandro masina mba ho tontosa soa aman-tsara, ny Dorkasy mba hahavita ny asa izay iandraiketany. Ireo voafonja tsy fidiny, dia nentin’ny Mpitandrina amim-bavaka koa. Ireo izay nanao voady, izay nahazo fahasoavana ary nandray fitahiana; ireo fianakaviana izay nahazo tombon’andro dia nentin’ny Mpitandrina amim-bavaka avokoa. Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany vavaka izany.
Teo amin’ny famaranana ny fotoana dia natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 643 : 1, 2: “ O! mandrosoa mba ho tena mpandresy”.
Novakiana ny tondrozotra ary nanolotra Tsodrano ny Mpitandrina. Natao ny andininy 3 tamin’ny hira FFPM 643 teo ihany.
Nitendry orga : Rajaofetra Philippe sy Harentsoa Rova
Nikirakira ny fanamafisam-peo : Andriamahatana Rija /Randriamahefa Tiana
Alahady fahadimy amin’ny karemy Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo
« Ny zanak’olona hatolotra ho amin’ireo lohan’ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna dia hohelohina ho faty, ….ary amin’ny andro fahatelo dia hatsangana indray Izy » Matio 20 : 18b ;19b
Ny Mpitandrina miana-draharaha Andrianaivomanana Willy Johnson no nitarika ny fotoana.
Ity no alahady voalohany ibanjinan’ny FJKM ny lohahevitra hoe « Mandresy ny fahafatesana ny Tompo ».
Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny Tenin’Andriamanitra ary ny Diakona Rajaoarisoa Herizo sy Rambeloson Mitsoa no nanatanteraka ny vavaka sy ny famakiana ny Soratra masina. Ny litorjia endriny voalohany no narahina. Azonao henoina ato ny hafatra.
Feon-javamaneno teo am-pidirana, ary rehefa vita ny Fiarahabana Apostolika dia novakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 121 :1-8, ho fiderana an’Andriamanitra.
Nohiraina ny FFPM 16:1, 2 « Avia ry vazantany ô » taorian’izany ary nanao ny vavaka ny mpitarika, nidera ny anaran’Andriamanitra.
Nanambara ny sitrapon’Andriamanitra izay nalaina tao amin’ny Deoteronomia 30 : 19 « Miantso ny lanitra sy ny tany aho anio ho vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana; koa mifidiana ny fiainana, mba ho velona hianao sy ny taranakao”.
Taorian’izay dia natao ny hira FFPM 203 : 1 – 2 « Ry Rainay be fitia », ary narahin’ny vavaka fifonana noho ny tsy nahatanterahina izany sitrapon’Andriamanitra izany.
Ho fiaiken-keloka dia natao ny hira FFPM 417:1 – 2 « Nandao Anao ela aho Raiko o ! ».
Nambaran’ny mpitarika ny Teny famelan-keloka izay nalaina tao amin’ny Isaia 45 : 25 ; Jaona 17: 3.
Niara-nitsangana ny Fiangonana rehefa avy nandray izany teny famelan-keloka izany ary nanatanteraka ny hira FFPM 141 : 1 « Efa resy izao ».
Ho fanavaozana ny fanoloran-tena dia niara-nanonona ny fanekem-pinoana laharana voalohany.
Nisy feon-javamaneno fohy taorian’izay.
Ny Salamo 119 : 103 « Endrey ny hamamin’ny teninao raha andramako ! Mihoatra noho ny tantely ato am-bavako aza » Misarika ny sain’ny ankizy dieny mbola kely hatraty amin’ny fianarana Sekoly Alahady mba hankamamy ny Tenin’Andriamanitra ary hisafidy ny hamaky ny Tenin’Andriamanitra, hisafidy mivavaka mandrakariva, hiaina izany amin’ny androm-piainany rehetra, mba hahafahany mandresy ny faharatsiana rehetra , ka ho mpandresy tahaka an’i Jesoa Kristy ihany koa isika.
Nilaza ny raharahan’ny Fiangonana ny tompon’andraikitra Rakotomanana Andry. Anisan’ny voalazany tamin’izany ireto manaraka ireto :
Ny TPM Ambatonakanga dia nanao taratasy fangatahana amin’ny fiomanana ny fanatrehana ny famoahana Mpitandrina.
Misy ny taratasy fanasana avy amin’ny komity noho ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 20 taona niasan-dRamahaleo Zo tao amin’ny trano fivarotamboky Antso.
Herinandrom-bokatry ny Sampana Dorkasy ny 4 – 10 aprily, Herinandro masina ny 10 – 17 aprily ary ny 18 – 23 aprily dia herinandron’ny STKZo.
Satria moa voalohan’ny volana ny andro dia nisy ny rakitra « anniversaire », ho an’ireo teraka volana martsa. Nasaina nitsangana izy ireo sy nentina amim-bavaka ary nanao ny rakitra tany amin’ny alitara avy eo.
Nitohy tamin’ny famakiana ny raki-pisaorana sy ny voady izany ary nanatanteraka ny fanatitra ny kristiana.
Natao ny hira FFPM 443 : 2 « Raiso ho Anao ny foko » ho fanolorana ny rakitra.
Ho fiomanana amin’ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra dia natao ny hira FFPM 177 : 1 -2 « Ry Fanahy Mpanazava ».
Natao ny vavaka mialoha ny famakiana ny Tenin’Andriamanitra ary novakiana ny perikopa anio. Izany dia nalaina tao amin’ny Jona 2: 1 – 11; Matio 20: 17 – 19; Apokalypsy 1: 17 – 20.
Manomboka mandinika lohahevitra vaovao isika hoy ny Mpitandrina dia ny hoe « Mandresy ny fahafatesana ny Tompo ».
Ny Matio 20 : 17 – 19 no nitondrany ny hafatra. Misy soramandry mialaza ao fa fanintelony izay no nilazan’i Jesoa ny zavatra hiaretany. Matio 16 : 21, Matio 17 : 22-29 no milaza izany hafa ka ity izany no fanintelony.
Milaza Izy fa ny zanak’olona dia mandeha araka ny Soratra Masina. Tsy resin’ny fasana ny Tompo. Ny fasana dia entina hanambarana ny fahavalo farany dia ny fahafatesana izany. Lohahevitra lehibe roa no azo alaina eto hoy ny Mpitandrina : « Nomelohina sy novonoina ho faty Izy » ary « Tsy nahazona Azy ny fasana ».
Ireo no foto-kevitra lehibe eto. Ireo no ataony hahatanteraka ny famonjena izay ho ataony.
Nomelohina sy novonoina ho faty Izy
Atolotra eo am-pelantanan’ny Mpitondra fivavahana Jiosy Izy
Tiany aseho fa ny Mpitondra fivavahana teo amin’ny Jiosy mihitsy no nanameloka Azy. Voaheloka araka ny Lalana jiosy Izy ary lalana mahafaty izany. Mandika ny sabata ny Tompo hoy ireo. Hita fa maneho fankahalana mihitsy izany.
Izany rehetra izany dia nihatra tamin’i Jesoa.
1. Atolotra eo am-pelatanan’ny Jentilisa Izy
Isan’ny filazana ratsy indrindra izany. Natao satria ireo dia velom-pialonana tamin’ny nataon’i Jesoa. Nataon’izy ireo ho fihomehezana Jesoa noho ny hoe « izany no olon’ny Jiosy ». Ny jentilisa no tompon-kevitra tamin’ny amin’ny famonoana an’i Jesoa.
Ny jentilisa dia olona tsy mifaninona amin’ny Jiosy ka tsy nahasahy nanohitra izany ireto Jiosy.
Handeha amin’izany lalana izany Jesoa ary efa nambarany tamin’ny mpianany izany.
2. Tsy nahazona Azy ny fasana
Na dia nomelohina sy novonoina ho faty aza Izy dia tsy nahazona Azy izany. Na ny olona, eny na ny anjely aza dia samy talanjona tamin’ny zavatra nisy. Tsy takatry ny saina ny drafitr’Andriamanitra ny amin’ny fanafahana ny olona. Eny, na i satana aza tsy nahalala izany drafitra izany, hoy ny Mpitandrina. Ny jentilisa no nataon’i satana fitaovana hamonoana an’i Jesoa.
Tsy nahazona an’i Jesoa ny fasana. Raha nijanona tao manko Izy dia toy ireny olona malaza, maty ireny. Ny fivavahana kristiana dia nijoro rehefa nitsangana tamin’ny maty ny Tompo. Izany tokoa no mampiorina ny finoana amin’ny maha kristiana antsika. Izany no mampisy lanja ny toriteny izay henointsika.
Araka izany, hita fa ny fahavalon’Andriamanitra dia tsy nahageja ilay irany, dia ilay Zanak’olona, ilay Zanak’Andriamanitra. Ny fahafenoana amin’ny maha olona sy ny maha Andriamanitra dia asehon’i Jesoa avokoa.
Ny fiainan-tsy hita dia toy ny andriamby misintona ny manan’aina rehetra. Esoriny ny aina ho afaka ary tsy miverina intsony, izay no atao hoe maty. Teto nefa dia tena nasehon’Andriamanitra mihitsy fa tena maty Izy ary resiny izany.
Vita ny fanavotana, voaloa ny trosa, afaka ny fatorana teo amin’ny fahavalon’ny ain’ny olombelona.
Tantara nasain’ny Tompo heverina ny ao amin’ny bokin’i Jona. Hita fa olona efa nanda ny fiantsoana Jona. Hita fa niaran-doza izy rehefa tsy nanaiky ny antson’ny Tompo. Rehefa nipetraka 3 andro tao an-kibon’ny trozona Jona dia niverina teny an-tany indray hanehoana fa afaka manao ny zavatra rehetra Andriamanitra.
Izany no atao dia mba hazoantsika finoana mahery, matanjaka. Im-betsaka io tantaran’i Jona no nolazain’ny Tompo. Rehefa mibebaka ianao dia afaka miverina ao anatin’ny fahavelomana indray.
Ny fahalalana fa efa resin’ny Tompo ny fahafatesana dia tokony manome hery anao iatrehana ny asan’Andriamanitra. Zava-dehibe ho antsika ny fanomezana izany filazana izany, ho toky sy fanantenana hoentina miasa.
Tsy manana fahefana hitelina sy hihazona ny ain’ny olona mino ao amin’ny Tompo intsony ny fahafatesana. Izany no fanantenantsika fa na inona miseho, na inona ady atrehina, dia ny fandresen’i Kristy no hoentintsika miady ihany koa.
Na mbola tsy tonga aza ny Paska hoy ny mpitondra ny Teny, dia tokony manana izany toe-tsaina izany isika. Sambatra izay rehetra nahita nefa mino. Mihoatra noho ny fahasambaran’i Tomasy izany ny antsika raha mino izany isika. Ny fiainantsika rehetra, ny anio, ny ampitso, dia ho fandresena hatrany hiomanantsika ny fiainana miaraka amin’ny Tompo.
Taorian’ny feon-kira fohy dia nanao ny anjara hirany ny Hasin’ny Famonjena. Ny hira « Fidionareo anio » an-dRandrianandrainy Falinirina no notanterahiny tamin’izany.
Nanao ny vavaka fangatahana ny Mpitandrina Raharijaona Solofo, izay nitondrany amim-bavaka ireo nangata-bavaka tamin’ny raki-pisaorana sy voady ary nofaranana tamin’ny vavaka Rainay izay any an-danitra izany.
Natao ny Hira FF 39 : 1 – 2 « Faniriako » ary novakiana ny tondrozotra 2022. Nanome ny tsodrano ny Mpitandrina taorian’izay. Nofaranana tamin’ny hira FFPM 625: 1 – 5 « Mpamonjy soa malala ô » ny fotoana, nofaranana tamin’ny Amen nohiraina.
Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina sy ny Mpitandrina miza-draharaha Andrianaivomanana Willy Johnson no niara-nanatanteraka ny fotoana.
Nohiraina ny FFPM 262 : 1, 2 « Indreto izahay » teo am-piomanana.
Novakiana ny Soratra Masina, natao ny vavaka fanandratana ary ny hira fihobiana Antema 1 « Masina, Masina, Masina ».
Ireto manaraka ireto ny hira natao nandritra ny fotoana: FFPM 115 : 1, FFPM 90, FFPM 107.
Natao ny vavaka ary nohiraina mandritra ny fanantazana ny raki-pisaorana sy ny fanangonana ny kapoaka ny ANTEMA 16 « Isaoranay, isaoranay ».
Nanome hafatra ny Mpitandrina:
Lioka 10 : 19 « Indro, efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maingoka sy handresy ny hery rehetra ananan’ny fahavalo ianareo, ka tsy hisy hampaninona anareo akory. »
Ny hira « Mialoka Aminao » no natao teo am- pamaranana ny fotoana.
Nipetraka ny Mpandray ary nivavaka mangina.
Nitendry orga : Rakotonarivo Hery sy Rabiazamaholy Mahery (Fenitra) ary ny SMZM
Nikirakira ny fafana : Raharijaona Nantenaina
“ MAMALY NY FAHARATSIANA NY TOMPO ”
Alahady fahaefatra amin’ny karemy – Alahadin’ny Asa Fifandraisana FJKM – Alahadin’ny Aumônerie
« Ary izany no angatahinay mandrakariva ny aminareo, mba hataon’Andriamanitsika ho miendrika ny fiantsoana ianareo..., mba hankalazaina ao aminareo ny anaran’i Jesosy Tompontsika… » 2 Tesaloniana 1 : 11a, 12a
Alahady notarihin’ny Vaomieran’ny Aim-Panahy ity alahady ity ary koa alahadin’ny Asa Fifandraisana eo amin’ny sahan’ny FJKM.
Ity no alahady farany amin’ny volana martsa hibanjinan’ny FJKM ny lohahevitra hoe « Mamaly ny faharatsiana ny Tompo ».
Ny Diakona sady Biraom-Piangonana Razafindrabe John Bam no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina miza-draharaha Andrianaivomanana Willy Johnson no nitondra ny Tenin’Andriamanitra.
Ny litorjia endriny faharoa no narahina. Azonao henoina ato ny hafatra.
Feon-javamaneno teo am-pidirana, ary rehefa vita ny Fiarahabana Apostolika dia novakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 122 :1-4, ho fiderana an’Andriamanitra.
Nohiraina ny FFPM 20:1, 2, 3 « Tsaroanay tokoa izao » taorian’izany ary nanao ny vavaka ny mpitarika, nidera ny anaran’Andriamanitra, nifona ny amin’izay vita tsy araka ny sitrapony. Nangataka ny fitarihana hibebaka, ka ny Fanahy Masina anie hitarika amin’ny fanarahana an’i Jesoa Kristy.
Andriamahery Hanitra, mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny K9, no tompon’anjara tamin’ izany. Nivavaka, nangataka ny Fanahy Masina izy teo am-piandohana.
Ny fanontaniana nasainy novaliana : Inona moa ny lohahevitra androany ? Tranon’Iza moa ato ? Iza no ivavahantsika ? eto Izy sa tsy eto ? Azonao antoka ve fa ato ny Tompo ?
Avy eo dia niaraha-novakiana ny Tenin’Andriamanitra ao amin’ny Isaia 1:13b « Tsy zakako ny fivoriana masina haroharoam-paharatsiana ». Nazavaina fa ny fivoriana masina dia isika rehetra ato am-piangonana. Tandremo fa tsy zakan’Andriamanitra izay tsy manaraka ny sitrapony. Aza mitabataba, aza mivezivezy fa mila mifantoka, aza manaparitaka fonona vatomamy sy biskitra fa faharatsiana daholo izany.
Nisy Fiangonana natokana ho an’ny Fotsy, ary nisy ankizy lahy kely mainty hoditra tsy nahazo niditra tao, ka nitomany. Reraky ny fitomaniana izy dia resin-tory ary nanonofy. Niteny taminy Jesoa, nanontany azy ny antony nampitomany azy. Namaly izy fa te hivavaka nefa tsy navela hiditra tao am-piangonana. Dia hoy Jesoa hoe : « Aza malahelo fa Izaho koa ange tsy tafiditra ao e ! ». Fiangonana io saingy misy faharatsiana tsy tiany ao. Tsy tian’Andriamanitra ny tsy mampiditra olona ao am-piangonana, ny tsy manaraka ny sitrapony.
Ny lesona nosintomina : Tsy tian’i Jesoa ny faharatsiana.
Teo am-pamaranana dia nasaina nitsangana ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady ary nanao ny hira FFPM 761:3 « Ry Jeso, Zoky be fitia ! »
Namarana tamin’ny vavaka ny tompon’anjara.
Ny Diakona Andrianasy Fanja no nanome ny Perikopa hovakiana, mialoha ny nivavaka izay nangatahiny ny Fanahy Masina. Rehefa izany, dia novakian’ny Diakona Rajaonah Mamy nisesy ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao.
Ny Perikopa : Jeremia 21:1-10 ; Lioka 21:20-24 ; 2 Tesaloniana 1:3-12.
Nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny hira FF 10:2 « Mivavaka aho satria » mialoha ny Toriteny.
Ny 2 Tesaloniana 1:3-12 no nandraisana ny hafatra.
Nanaiky, ho valimbavaka ho an’i Paoly, ireto kristiana tao Tesalonia.
Ny hafatra :
1-Ny kristiana manaiky ho valimbavaka dia mandeha, miendrika ny fiantsoan’Andriamanitra.
Ny and.11 dia vavaka nataon’i Paoly. Antso ho amin’ny famonjena ny eto, amin’ny finoana an’i Jesoa Kristy, ary antso ho an’ny rehetra fa tsy ho an’ny Ministera. Ny rehetra mihitsy no antsoina.
Refeha mino dia tokony ho miendrika izany fiantsona izany. Rehefa tena ekena Jesoa dia mamaritra ny ataontsika ny fandraisana Azy. Ny « position » (toerana) no mamaritra ny « acte » (asa). Izay no ambaran’ny Soratra Masina iray manontolo : Ny voa no hahafantarana ny hazo.
Olan’ny Fiangonan-dehibe ny mahita kristiana tsy dia mendrika loatra, rehefa mandeha miangona.satria ny zavatra ivelany no mahamaika fa tsy ny hanova fiainana.
Ny fahamarinan’ny Filazantsara dia tsy ny hanova ny ivelany fa ny hanova ny fo.
Ny fahazakana ny fahalemen’ny hafa no maha kristiana. Mahafinaritra ny mahita ireo satria tsy hiantso ny marina Jesoa, fa tonga hamonjy ny very.
Noho izany : Taomy ho aty am-piangonana ny rehetra, indrindra fa ireo manahirana, heverina ho hafahafa. I Paoly dia nivavaka ho an’ny Tesalonianina, mba handehanany mendrika ny Filazantsara.
Raha tena Kristy ny ao anatinao dia ho halanao ny faharatsiana rehetra. Ndeha tena hanaiky marina an’i Kristy hahitana ny fahatsarana rehetra, hanamboarana ny fo.
2- Ny kristiana manaiky ho valimbavaka dia andrim-pankalazana an’Andriamanitra (and. 12)
Mba hankalazaina ao aminareo Andriamanitra.
Manomboka eo amin’ny and. 3 dia feno ny fahatsaran’Andriamanitra ireo Tesalonianina ary mbola hetahetan’i Paoly ny mbola ho tsara kokoa izy ireo, mbola hitomboan’ny finoana, hifankatia, hanana faharetana noho ny fanenjehana, mba ho mendrika ny Fanjakan’Andriamanitra.
Rehefa mitory ianao, dia misy manenjika. Izany no ahafantarana ny fahamarinana. « Eny, izay rehetra te ho velona amin’ny toe-panahy araka an’Andriamanitra, izay ao amin’i Kristy Jesosy, dia henjehina. »
(II Timoty 3 : 12). Raha tena marina ny fanoloranao tena dia tsy maintsy misy manenjika ianao. Ho halan’ny olona rehetra ianao, noho ny anaran’i Jesoa Kristy.
Fanontaniana : marina amin’ny fanoloran-tenanao ve ianao ?
Na eo aza ny manenjika, Andriamanitra tsy mamela anao ho irery, mandray an-tànana ny mombanao Izy. Mamaly fahoriana izay mampahory Andriamanitra, raha tena manana fanolorantena ho an’i Kristy ianao.
Ny hafatra : torio ny Filazantsara marina. Isika no fitaovana fitoriana ny Filazantsara entina hankalazana an’Andriamanitra.
Ka mba manao ahoana isika ? Manaiky ho valimbavaka ve isika ?
Fitaovana hankalazana sy toerana hankalazana isika, ka miala ho azy ny fatotra mahazo anao, satria ianao no Tempolin’Andriamanitra, Jesoa manala amin’ny maizina satria fahazavana Izy.
Ny tena Filazantsara dia Jesoa.
Ho famaranana dia misy tantara kely :
Nanontany ilay mpampiantra Sekoly Alahady : Aiza Jesoa no mitoetra ?
Namaly ilay ankizy iray : Ao amin’ny « douche ».
Mpampianatra : Fa ahoana ?
Ankizy : Rehefa miomana handeha i Dada sy Mama, dia i Mama no miditra voalohany ary ela be izy ao. Dia hoy i Dada hoe : Jesosy ô ! mbola ao foana ve ?
Ry kristiana ! Ao anatinao Jesoa (position), ary raha tena zanak’Andriamanitra ianao, dia miseho amin’ny ataonao izany (acte).
Feon-javamaneno fohy taorian’ny Toriteny ary nanao ny anjara hirany ny Sampana RFF : « Lalam-pamonjena ».
Nisaotra an’Andriamanitra noho ny fandaharany satria nanambara Izy fa handeha hamaly ny antsony isika, mba hafahantsika manaiky ho valimbavaka ary nangataka ny fitantanan’ny Tompo.
Rehefa izany, dia niarahan’ny Fiangonana nanonona, teo am-pitsanganana, ny Fanekem-pinoana laharana faha 4.
Vita izany dia nipetraka, nivavaka mangina tao anatin’ny feon-javamaneno.
« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo ».
Razafimaharo Mamy, Biraom-piangonana Mpitantsoratra, no nilaza ny raharaham-piangonana.
-28-31 martsa : andron’ny sekoly FJKM any Antsirabe. Mandray ireo fanomezana ho fanohanana izany hetsika izany.
-Faha 185 taona namonoana ny Maritiora : handrafitra ny tantara ny fianakavian’ireo Maritiora.
27 martsa ao amin’ny FJKM Amboninampamarinana.
-Alahadin’ny Aumônerie : ho fanohanana ny Asa dia manana anjara valopy 50 ny FJKM Amparibe Famonjena.
-27 martsa-1 aprily : Mpiara-mamaky ny Baiboly (Fiofanana).
Ny androany :
-Ankatoky ny Fandraisana
-Sekoly Alahady: sehatra ho an’ny ankizy sy tanora mandritra ny Ankatoka.
-603 no isan’ny mpivavaka tonga.
Ny Mpitandrina nanao antso ho an’ny Mpandray te hiditra SETELA, FITELA sy mpiomana ho Mpitandrina.
Andriamasinoro Tantely, Biraom-piangonana Mpitantsoratry ny vola, no namaky ireo voady sy raki-pisaorana.
Ireo voady sy raki-pisaorana : noho ny tsingerinandro nahaterahana, fandraisana ny Sakramentan’ny Batisa.
Ireo hira nangatahina: RFF “Izaho no fananganana”-“Feno toky ny fanahy”.
Ny hira 441:3 « Raiso aho, Tompo ô » no notanterahina teo am-pitsanganana ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana ny fanolorantena.
Nitohy ny feon-javamaneno teo am-panangonana ireo kitapon-drakitra.
Ny Asa Vavolombelona notanterahin’ny Fiangonana dia ny Sakramentan’ny Batisa ho an’ny zaza Ramananarivo Valy Soa ary ny zaza Andrianjafy Amine Maria Andréa.
Natao ny hira FFPM 813:1, 2 « Tia zaza. » nandritra ny fiakarana teny amin’ny alitara.
Nitsangana ny Fiangonana ary noventesina avy hatrany ny hira FF 26:1 « Jesosy reharehako » mialoha ny nanaovan’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina ny vavaka fangataham-pitahiana.
Mila kristiana valimbavaka ny Tompo, manaiky ny ho fankalazana an’Andriamanitra eo anatrehan’ny mifanerasera rehetra.
Mivavaka ho an’ny Fiangonana FJKM, ny Asan’ ny Fiangonana voafaritra ao amin’ny tondrozotra, ho an’ny komity ao anatin’ny fankalazana, ny AFIFAB sy ny adidy ary ny andraikitry ny Aumônerie. Mitondra amim-bavaka ireo mianatra SETELA sy FITELA, ireo miatrika fifaninanana hiditra ho mpiomana ho Mpitandrina. Mahatsiaro amim-bavaka ireo azon’ny tsindry hazo lena, ny voafonja, ny ao anatin’ny fahoriana, ny kere. Mivavaka ho an’ireo mpanompo nanao raki-pisaorana sy voady masina
Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo, izay niarahan’ny mpianakavin’ny finoana nanonona ary notohizana tamin’ny tondrozotra 2022.
Ny FF 26 ihany, andininy faha-3, nofaranana tamin’ny Amen no nanohizana ny fotoana. Nipetraka ny Fiangonana avy eo, nanao vavaka mangina tao am-po.
Nitendry orga : Rajaofetra Philippe sy Rajaofetra John ary Rajaofetra Antonio (Mpiofana ho mpitendry orga)
Nikirakira ny fanamafisam-peo : Rabiazamaholy Hery Lanto
Naka sary : Ramiadamanana Lovatiana Josian
“MAMALY NY FAHARATSIANA NY TOMPO”
Alahady ivom-bokatry ny Sampana Taninketsa (STAF)
“Ary ta-hampahatsiaro anareo aho, na dia efa fantatrareo rahateo aza ny zavatra rehetra…” Joda 5- 13
Isaorantsika mandrakariva ny Tompo Andriamanitsika fa manankarem-pahasoavana tokoa Izy. Nomeny antsika ity fotoana ity ho fiaraha-miombom-bavaka amin’ny Sampana Taninketsa. Mbola hibanjinantsika ihany koa ny lohahevitra hoe : “MAMALY NY FAHARATSIANA NY TOMPO”.
Araka izay voalaza tery ambony, ny fotoana androany dia nosahanin’ny Sampana Taninketsa. Anio rahateo no ivon’ny fanateram-bokatra ho an’izany sampana izany.
Nanasa ny Mpitandrina Randrianantoanina Anjara ny STAF ny sampana, hitory sy hitondra ny hafatry ny Tenin’Andriamanitra. Ny litorjia fahatelo fampiasa eto anivon’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara, no nanatanterahina izao fanompoana masina izao. Azonao henoina ato ny hafatra.
Notanterahin’ny sampana avy hatrany ny hira fiderana: “Feno fifaliana”.
Taorian’ny fiarahabana apostolika nataon’ny Mpitarika dia niarahan’ny mpianakavin’ny finoana namaky ny Salamo 67 : 3-7 ho fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra. : “ Hidera Anao ny firenena, Andriamanitra ô; eny, hidera Anao ny firenena rehetra.
Hifaly sy hihoby ny firenen-tsamy hafa, Satria mitsara marina ny firenena Hianao; ny firenen-tsamy hafa ambonin’ny tany dia entinao; Hidera Anao ny firenena, Andriamanitra ô; eny, hidera Anao ny firenena rehetra. Ny tany efa nahavokatra; mitahy antsika Andriamanitra, dia Andriamanitsika. Mitahy antsika Andriamanitra; ary hatahotra Azy ny vazan-tany rehetra. Amen !”
Notohizana tamin’ny hira FF 7 : 1- 2 “Tsy hainay ny hangina” izany, nankalazana an’ Andriamanitsika.
Nasandratry ny Fiangonana teo anatrehan’Andriamanitra ny vavaka fisaorana sy fiderana nanao hoe:“Ry Andriamanitra Rainay izay any an-danitra, tsy mitsahatra misaotra sy mankalaza Anao izahay ary feno ny fiderana Anao mandrakariva ny molotray. Andriamanitra mahagaga Ianao ary tsapanay hatrany ny fitahianao ny Fiangonana, ny fitahianao ny Sampana Taninketsa. Na dia mpanota tsy mendrika aza izahay dia tsy mahafoy anay Ianao, ka mbola nahatratra izao fotoana natokan’ny Fiangonana hitondrana amim-bavaka ny sampana Taninketsa izao. Misaotra Ray noho ny afahanay nanatanteraka izany ary koa noho ny asam-panompoana atolotrao hotanterahinay.
Fifaliana ho anay ny midera sy mitory Anao. Mangataka izahay ny hanatrehanao izao fotoana izao, mba hotanteraka ny Teninao ny amin’ny fivoriana masina izay ataon’ny mpanomponao. Izay rehetra hotanterahina eto anie dia ho hanitra ankasitrahinao sy ho fanehoana ny voninahitrao irery ihany. Ho Anao irery ny haja sy ny voninahitra mandrakizay. Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy . Amen!”
Andriamasinoro Erika, mpampianatra ao amin’ny Kilasy fahafolo, no nanatanteraka izany.
Rehefa avy niarahaba ny Fiangonana sy ny ankizy ary ny tanora izy, dia novakiana ny Teny araka ny Ohabolana 10: 19 : “ Ny teny maro tsy ilaozan’ota; fa izay mahatana ny molony no hendry.”
Notohizany tamin’ny vavaka fangatahana tamin’ny Tompo mba hahatonga ny Fiangonana hahay mihaino ny Teniny ary hanana fo mahay mitazona sy mitahiry ny fampianarana.
Nisy ny tantara kely nentina nanazavana ny hafatra araka io Ohabolana 10:19 io, dia ny tantaran’ilay tovolahy atao hoe Théo, izay tia miteniteny foana sy tia mivazivazy. Araka izany, sahiny ny namazivazy hatramin’ny zava-masina eo anivon’ny Fiangonana, toy ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo. Rehefa nandray ny mofo sy ny kapoaka mantsy ny Mpandray dia mba noraisiny koa ny mofomamy teny an-tanany hamazivaziany ny olona teo akaikiny. Izy dia mbola tsy Mpandray. Andro vitsy taorian’izay dia nofaizin’Andriamanitra i Théo ka narary tao amin’ny aty vavany sy ny tendany no sady nanavy be izy .
Ny hafatra dia tsy mahasoa antsika sady miteraka loza ny miteniteny foana sy ny milamila dera amin’ny alalan’ny teny maro , indrindra fa ny tsy fanajana ny zavatra masina.
Notohizana tamin’ny vavaka ny hafatra, ho fangatahana famelan-keloka sy fifonana ho an’ny ankizy tia miteniteny foana ary ny mba hialana kosa amin’izany.
Mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia nohiraina ny FFPM 183: 1,2: “Midina ry Fanahy o!”
Nisy ny vavaka ho an’ny Tenin’Andriamanitra izay notanterahin-dRanaivo Ambinintsoa Nathanael, tanora mpikambana ao amin’ny STAF. Novakiana misesy avy eo ny perikopa izay voalahatra hovakiana androany.
Ny Testamenta taloha dia araka izay hita ao amin’ny 1 Samoela 2 :27-36. Ny Testamenta vaovao sy ny epistily kosa dia araka izay hita ao amin’ny Lioka 20:45-47 ary ny Joda 5-13.
Rajaofetra Loic no namaky ny Testamenta aloha; ny Filazantsara dia
novakian-dRajaofetra Cédric. Andriambelomanana Tsanta no namaky ny
Mialoha ny nitoriana ny Tenin’Andriamanitra dia natao ny hira FFPM 244 : 1-2-4:
“Ry Jesoa mba henoinao”.
Niarahaba ny Fiangonana teto Amparibe Famonjena sy ny Sampana Taninketsa manokana ny Mpitandrina Randrianantoanina Anjara, mpiandraikitra ao amin’ny Aumônerie Ambatonakanga. Tao amin’ny epistilin’i Joda 5-13 no nakany ny hafatra hotoriana.
Tari-dalana ho antsika amin’izao perikopa izao ny sora-mandry ao amin’ny fiandohan’ny epistily manao hoe : “Fananarana ny amin’ny mpampianatra sandoka”.
Mazava araka izany fa ny votoatin’ny epistily dia mifono anatra; anatra ho fiarovana ny finoana sy famonjena ny finoana.
1-Anatra ho amin’ny fampahatsiahivana ataon’ny Soratra Masina (and. 5-7)
Misy ny fampahatsiahivana ny famonjen’Andriamanitra ny Zanak’Israely tany
Egypta. Nafahan’Andriamanitra tamin’ireo mpampahory azy ny Zanak’Israely, kanefa amin’ireo izay nanehoan’Andriamanitra ny famonjeny, dia misy ny tsy mino ary misy ihany ny tsy matoky an’Andriamanitra.
Ampahatsiahivina etoana ary, fa ireny tsy manana finoana ireny, dia haringan’Andriamanitra.
Na dia efa nomanin’Andriamanitra ho an’ny Fiangonana manontolo aza ny famonjena amin’ny alalan’i Jesoa Kristy, Izay nanolotra ny tenany hifantsika teo amin’ny hazofijaliana ho famonjena antsika, dia mbola misy ihany olona ao amin’ny Fiangonana, mbola tsy mino izany, tsy miaina izany ary tsy manaiky izany, ka hampahatsiahivin’i Joda, fa haringana ny olona tsy manaiky ny fitarihan’ny Tenin’Andriamanitra sy tsy manaiky hahitsin’ny Soratra Masina.
Ny fampahatsiahivana faharoa dia ho an’ireo izay rehetra tsy mitana ny andraikiny
amin’ny anjara raharahany, manao antsirambina ny asa fanompoany (and.6). Ho voahozona amin’ny fahamaizinana mandrakizay ary haringan’Andriamanitra ihany koa izy ireny.
Manana anjara isika eto amin’ny Fiangonana ary notendren’Andriamanitra mba hahatoky amin’izany anjara fanompoana izany. Izay manao kitoatoa amin’izany anjara raharahany izany dia haringan’Andriamanitra koa.
Ny fampahatsiahivana fahatelo dia ny mikasika an’i Sodoma sy Gomora, izay maneho
ny fahasahian’ny olona amin’ny fijangajangana sy ny filàn’ny nofo ary ny amin’ny firaisan’ny mitovy fananahana. Ireny dia haringan’Andriamanitra koa.
Ireny rehetra ireny dia natao ho fampahatsiahivana antsika, ho fananarana sy hafahan’ny Fiangonana mandini-tena ka hitondra azy ho amin’ny fibebahana.
Hampahatsiahivina amintsika anio ary fa ho an’ny Fiangonana manontolo ny Famonjena.
Fandringanana kosa no miandry ireo izay tsy mety mino , tsy mety ahitsy, manohitra na mamilivily lalana ny hevitry ny Soratra Masina .
Ry havana, andeha isika hanaiky hotarihan’ny Soratra Masina, handini-tena ao anatin’izao vanim-potoan’ny Karemy izao. Hanao jery todika ny fiainam-panahintsika. Izay rehetra hita fa tsy mety dia entintsika hifonana eo anatrehan’ny Tompo, fa hoy ny Soratra Masina: “izay rehetra manafina ny fahotany , tsy ambinina”, ka tsy ho sanatria ho fanamelohana ho antsika ny fahatongavantsika eto an-tranon’Andriamanitra, fa mba handraisantsika ny famelan-keloka kosa, hitondra antsika ho amin’ny famonjena, hananantsika fiadanana.
2-Hanatra ho amin’ny fampianaran-diso sy ny mpampianatra sandoka (and. 8-13)
Eo amin’ny and. 11 dia ambaran’ny Soratra Masina fa hahita loza tokoa ny mpampianatra sandoka.
Ny mpampianatra sandoka dia havanana amin’ny filazana lainga amin’ny alalan’ny nofy .
Hitantsika ombieny ombieny ny fahitana ny olona mijoro vavolombelona na amin’ny fahita lavitra na amin’ny tambazotra serasera milaza fa mahita fahitana. Asain’Andriamanitra mitandrina isika ny amin’ireny. Ao ireo miteny ratsy sy manimbazimba ny fivavahana marina. Mila mianatra Soratra Masina isika mba hahafantarantsika izay marina sy diso; hahafantarantsika ihany koa ny foto-pinoana ka ny Fanahy Masina no hampianatra antsika, hahafantarantsika ny marina momba izany.
Noho izany dia aoreno tsara ny finoanao mba tsy ho ny zanaky ny Fiangonana no ho lasibatry ny fampianaran-diso sy ny mpaminany sandoka.
Izao Soratra Masina izao dia mitaky andraikitra amintsika zanaky ny Fiangonana, olom-boavidin’Andriamanitra, mba handray marina ny finoana an’i Jesoa Kristy, mba ho zanaky ny Fiangonana misitraka ny famonjen’Andriamanitra ao amin’i Jesoa Kristy, hafahantsika ho marina amin’ny finoana, ka tsy ho voavilivilin’ny rehak’izao tontolo izao.
Koa rehefa tsy mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra, dia isika zanaky ny Fiangonana, no hijoro hanohitra izany. Isika ray aman-dreny dia tokony ho sahy mampianatra ny zanatsika, mananatra sy manitsy amin’izay hita fa loza mananontanona ny fiainantsika.
Ry havana , andeha isika handray ny anatra, ka izao Soratra Masina izao no hanamboarantsika indray maka indray ny finoantsika, ny fitondrantenantsika, ny fomba fisainantsika, hahatonga antsika ho mpanompo tsy mahazo henatra, ho tafatoetra mandrakariva ao anatin’ny Fiangonana.
Manoloana ny hafatra izay notoriana dia nataon’ny Mpitarika ny vavaka ho setriny:
Ry Andriamanitra Rainay, renay teo ny sitraponao. Nananatra anay Ianao mba hiarovana ny finoana, mba hamonjena ny finoana ary mila mianatra ny Soratra Masina izahay. Tsy nanaraka izany anefa izahay fa kely finoana, tsy nanaiky ny fitarihan’ny Fanahy masina, tsy nianatra ny Teninao. Misaotra Anao anefa Tompo fa raha ny haben’ny otanay dia tokony ho faty izahay. Nefa tsy mamaly anay araka ny fahotanay Ianao. Mamela anay hanatona Anao sy hifona Aminao. Indreto izahay mahatsiaro sy miaiky ny fahadisoanay eo anatrehanao. Tompo o! Mifona Aminao izahay; henoy ny vavakay, ka sasao izahay mba ho afaka heloka, diovy izahay mba ho afa-pahotana noho ny haben’ny indrafonao. Aoka izahay hiala amin’ny faharatsiana, ka handray ny anatra avy Aminao. Hibanjina ny fahatsaranao Jesoa, modely fakan-tahaka tsara indrindra. Ho hita taratra eo aminay fa mankahala ny ratsy izahay. Mihainoa anay ry Andriamanitra fitiavana o! Ka valio ny vavakay. Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy Mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen.
Izao no Teny famelan-keloka noraisin’ny Fiangonana, nalaina tao amin’ny Isaia 52:3, Isaia 44:22, Lioka 19:10: “Fa izao no lazain’i Jehovah: Tsy vola tsy harena no nivarotana anareo, ka dia tsy vola tsy harena koa no hanavotana anareo; Izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona; Koa miverena Amiko, fa efa nanavotra anao Aho; Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very . Voavela ny helokareo noho ny Anarany Masina . Haleloia!”
Ny olona nandray ny Tenin’Andriamanitra sy mahatsiaro fa voavela heloka dia sahy manambara ny finoany eo anatrehan’ny Andriamanitra sy ny Fiangonana.
Ny fanekem-pinoana laharana fahatelo no notanterahin’ny Fiangonana tamin’izany.
Nanatanteraka ny tatitra ny Mpitantsoratry ny sampana Taninketsa. Ny Jaona 15:16 no niarahabany ny Fiangonana. Io rahateo no teny fanevan’ny Sampana hatramin’ny nijoroany.
Nanamarika ny faha 30 taonany tamin’ny taona 2021ny STAF.
Asa maro no natao, toy ny fanatanterahana ny herinandrom-bokatra nanaovana ny famangiana ny akany mitaiza ny zaza kamboty eny Tangaina; ny fizarana vatsy ho an’ny mpianatra Soratra Masina; ny fanaovana ny randonnée niaraka tamin’ny K160, ny fandraisana anjara tamin’ny fitsangantsanganan’ny Fiangonana.
Teo koa ny fanatanterahana ny Krismasy fifaliana; ny Fety Krismasy niarahana tamin’ny Firaisan’ny sampana; ny fanatrehana ny Herinandron’ny Fianakaviana niaraka tamin’ny VMFP.
Ny STAF dia mitory an-kira ny Filazantsara.
Ny 1 Samoela 2: 30d no nentin’ny Mpitantsoratry ny Fiangonana, Rakotomanana Andrimbazotiana, niarahaba ny mpianakavin’ny Finoana.
Manohy ny fibanjinana ny lohahevitra hoe : “Mamaly ny faharatsiana ny Tompo” isika ankehitriny.
Alahady fahatelo manaraka ny Karemy, ary eo amin’ny sahan’ny FJKM dia ity no fotoana hitondrana amim-bavaka ny asan’ny SAF FJKM.
Hotanterahina any Antsirabe ny Andron’ny sekoly FJKM ny faha 28-31 martsa 2022.
Manomboka ny alatsinainy 21 martsa 2022 ny Herinandron’ny Fifandraisana, hifanotronana amin’ny AFIFAB.
Alahadin’ny SAF FJKM androany.
Ny Mpitandrina dia nanao antso ho an’ny Mpianakavin’ny Finoana amin’ny fidirana ho SETELA na koa ny FITELA.
Andriamasinoro Tantely, Biraom-Piangonana, no nanolotra ny voady sy ny raki-pisaorana.
Ireto no hira nangatahin’ny mpianakavin’ny finoana : FFPM 462:1 , HF 12 “Feno toky ny fanahy”.
Tao ny zanaky ny Fiangonana izay nisaotra an’Andriamanitra fa nahalafo ny fiara izay namidy ary mangata-bavaka ho an’ny ankohonany.
Tao ny nisaotra an’Andriamanitra fa Izy dia manatanteraka ny Teniny amin’ny mpanompony.
Nisy ny renim-pianakaviana nanao raki-pisaorana noho ny valimbavaka noraisiny.
Nisy ny fianakaviana nanao raki-pisaorana noho ny famindram-po sy ny fahasoavana ary mbola matoky mandrakariva ny fitantanan’ny Tompo ny fiainany.
Tamin’izany no nanambarana fa mamaly ny faharatsiana Andriamanitra ka mananatra Izy ho fiarovana ny finoana.
Ampahatsiahivin’ny Tompo, ny famonjena efa tanteraka teo amin’i Jesoa Kristy.
Nampitandrina Izy ny amin’ny mpampianatra sandoka.
Tamin’izany koa no nangatahana tamin’ny Tompo mba ho voaaro amin’ny fahavalon’ny finoana ireo Mpitondra ny Fiangonana samihafa.
Nivavaka ho an’ny foibe FJKM.
Nivavaka ho an’ny synodamparitany rehetra.
Nivavaka manokana ho an’ny Synodamparitany andrefana.
Nivavaka ny ARM.
Nivavaka ho an’ny mpianakavin’ny finoana eto amin’ny Fitandremana ary nivavaka ho an’ireo izay nangata-bavaka manokana tamin’ity andro androany ity, ho an’ireo izay nanefa ny voadiny sy nanao raki-pisaorana ho an’Andriamanitra.
Notanterahina ny hira FFPM 460 “Ario ny tahotrao, ry olona osa fo ” mialoha ny famakiana ny Tondrozotra 2022.
Novakiana ny Tondrozotra ary rehefa izany, dia natolotra ny Tsodrano.
Ny hira FFPM 731:1: “Enga anie ka homba anao Jesoa” no natao, nentina namaranana izao fanompoam-pivavahana androany izao .
Nikirakira fafana : Rabako Tovohery
Naka sary : Robel Hanitra
Alahady faharoa amin’ny karemy
« Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin’ny Ray, afa-tsy amin’ny alalako. » Jaona 14 :6
Alahady faharoa amin’ny karemy androany. Ny Mpitandrina evanjelistra avy any amin’ny FJKM Ambohidroa, Synodamparitany Ambalavao Tsienimparihy, Rakotondrambola Simon Armand no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana. Nisy koa ny asa sy fampaherezana amin’ny maha alahady faharoan’ny volana. Ny Diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-Panahy Rasolonjanahary Fidy no nitarika ny fotoam-bavaka, nanaraka ny litorjia amin’ny endriny faharoa. Azonao henoina ato ny hafatra.
Nisy feon-javamaneno fidirana sy fanolorana ny evanjelistra hitory Teny ary fiarahabana apostolika. Rehefa izay dia novakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 92 : 1-5 hoe : « Tsara ny hidera an’i Jehovah sy ny hankalaza ny anaranao, ry Avo Indrindra ô, ary hanambara ny famindram-ponao nony maraina sy ny fahamarinanao nony alina amin’ny valiha tory folo sy amin’ny feon-dokanga. Fa ampifalinao amin’ny nataonao aho Jehovah ô ; ny asan’ny tananao no hihobiako. Jehovah ô, akory ny halehiben’ny asanao ! Lalina indrindra ny fisainanao. »
Noredonina ny hira FFPM 24 : 1,2 « Ny lanitra ao ambony » ary nataon’ny mpitarika ny vavaka fisaorana izay narahana feon-javamaneno. Nitohy avy hatrany ny fotoana.
Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny kilasy faharoa, Ratiarison Vall, no nitarika izany. Natsangana ny ankizy sy ny tanora nanao ny hira FFPM 761 : 1,3 “ Ry Jeso, Zoky be fitia”. Nisy vavaka.
Ny lohahevitra banjinina eo amin’ny sahan’ny FJKM mandritra ny volana dia hoe : “ Mamaly ny faharatsiana ny Tompo ” ary ny Teny fanevan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara dia “ Miorena tsara, aza miova ”. Ny faharatsiana dia mahatonga antsika tsy miorina tsara ao amin’ny Tompo. Mamaly antsika amin’ny faharatsiana ataontsika Izy. Anisan’ny faharatsiana mora atao sy sarotra ialana ny lainga. Ny andinin-tSoratra Masina niompanan’ny fampianarana fohy dia : » Esory aminao ny vava mandainga… Haringanao ny mpiteny lainga » ao amin’ny Ohabolana 4 : 24a ; Salamo 5 : 6a. Fadio ny mandainga manomboka anio, mahavoa anao sy ny manodidina anao izany, mba tsy ho isan’ny tsy hatokisan’ny olona ianao. Nasaina novakian’ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady teo am-pitsanganana ny Teny. Nisy vavaka nataon’ny mpitarika nasaina naverina. Toy izao izany : « Jesoa ô ! Misaotra Anao aho fa nampianatra ahy indray Ianao androany. Tena tsy tianao ny lainga ary aringanao izay rehetra mpandainga koa manomboka anio Jesoa ô, dia esory amiko ny lainga ary ny Fanahinao Masina hanampy ahy hahazoako mahavita izany. Amin’ny Anaranao Jesoa. Amen ». Nanaraka izany ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.
Nohiraina ny FFPM 183 : 1,2 “ Midina ry Fanahy ô! ”. Ny vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina dia notontosain’ny Diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Fifandraisana Rabako Tovohery, novakiany koa ny Salamo 5 : 1-12 raha Rabako Miora no nanohy izany araka ny ao amin’ny Jaona 3 : 17-21 ; Romana 3 : 9-20. Natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 262 : 4 “ Indreto izahay, ry Jeso ô ” mialoha ny toriteny.
Ny toerana iasan’ny Evanjelistra Rakotondrambola Simon Armand :
Synodamparitany lalana fahefatra no mankany Ambalavao, 400 Km avy eto Antananarivo. 36 Km avy eo an-tampon-tanàna ny Fitandremana. Ambondrombe no eo avaratra ary eo atsimo ny Parc National Andringitra. Ratsy ny lalana, bisikileta no andehanana. Fiangonana efatra no entina ankoatra ny renivohi-pitandremana, 4 Km no zana-piangonana akaiky indrindra. Manam-bady sy manana zanaka roa ny evanjelistra. Momba ny fiainan’ny mponina amin’ny ankapobeny : mivavaka ny olona any saingy mbola misy manompo sampy. Vokatry ny fandalovan’ny rivodoza Batsirai tsy mbola afaka namangy ny renivohi-pitandremana satria misy tetezana tapaka, ny rano tsy tia vahiny, tsy azo itana ny lakana.
Ny Salamo 5 no niompanan’ny hafatra androany.
Tsy maintsy hiaina eo amin’izao tontolo izao feno faharatsiana i Davida mpanao salamo ka nila torohevitra avy amin’Andriamanitra, izay asongadiny ao anatin’ny tonombavany. Andriamanitra izay ivavahany dia mpitsara marina, tsy tia faharatsiana. Tanisainy ao ny toetran’ny mpanao ratsy : mpirehareha, mpiteny lainga, mpamono olona.
Tsy manana henatra izay miaina amin’ny faharatsiana, helohin’Andriamanitra. Ny ataonao ihany no hitsarany anao. Na eo aza anefa izany, Andriamanitra dia tia ny mpanota fa mankahala ota kosa. Hoy i Jesoa ao amin’ny Lioka 5:32 :“ Tsy avy hiantso ny marina Aho, fa ny mpanota mba hibebaka “. Tsy miova Andriamanitra fa mandinika antsika tsirairay avy, manara-maso ny fiainantsika. Manainga antsika ny Tompo hiala amin’ny faharatsiana. Aoka izay ny fireharehana fa i Jesoa Kristy velona no hataontsika rehareha. Aoka izay ny lainga. Mitaona antsika ny Tompo tsy hamono olona.
Faritra mena ny kaominina tamin’ny 2013 : teo akaikin’ny trano vadim-piangonana no mirefotra ny basy. Ireo dahalo ireo hay olona ao anatin’ny Fiangonana ihany. Izany no itoriana ny Filazantsara, anirahin’ny Tompo. Ny andrasan’ny Tompo amintsika dia hanampy ny olona mba ho velona, hahatanterahany ny asa fanompoany.
Aoka isika hibebaka, andao hanao ny sitrapony sy handà izay mety ho faharatsiana rehetra.
I Davida dia mangataka ny fitarihan’ Andriamanitra amin’ny dia tsy maintsy hirosoany. Vao maraina izy mangataka Aminy hitarika azy amin’ny lalan’ny fahamarinana hamakivakiana ny tontolo andro satria tsy maintsy hiaina hiaraka amin’ny olon-dratsy.
Araka ny eo amin’ny and. 12 : rehefa manao ny marina dia Andriamanitra mitahy sy miaro. Tena fitahiana manana amby ampy arahim-pankasitrahana feno no ataony, ao amin’i Jesoa Kristy no fanatanterahana izany satria Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana (Jaona 14 : 6) ka izay rehetra mino Azy dia ankasitrahan’Andriamanitra.
Ataovy tafatoetra ao amintsika i Jesoa Kristy velona. Ivelomy ny fahamarinana na aiza toerana ametrahany antsika, na eo aza ny sedra. Tsy mora ny asa kanefa rehefa manao ny asany sy miaraka Aminy dia Izy no mitahy, mikarakara, miaro. Aoka isika ho kristiana modely, andao hanana ny toetrany isika amin’ny androm-piainantsika, ho marina amin’ny lafiny rehetra.
Ialao izay mety ho faharatsiana fa tia ny marina Izy ary ho anisan’izany anie isika!
Ho an’ Andriamanitra irery ny voninahitra ! Amen.
Nihira ny “ Misaora an’i Jehovah ” ny Sampana Tanora Kristiana Zandriny.
Rehefa izay dia nanatontosa ny vavaka setrin’ny Tenin’ Andriamanitra sy fifonana ny mpitarika.
Manoloana ny hafatr’ Andriamanitra, menatra sy mangahiahy izahay fa tsy nahatanteraka izany. Meloka eo anatrehanao izahay na amin’ny fihetsika na amin’ny fiteny, indrindra amin’ny fisainana. Mahatsiaro tena ho tsy mendrika eo anoloanao. Koa ankehitriny dia manatona mibebaka Aminao izahay, mangataka famelan-keloka Aminao izahay.
Loary mangina eo anatrehan’ Andriamanitra ny helokao, mibebaha ianao…
Jesoa Kristy ô! Mifona Aminao mba tsy hanarianao anay noho ny otanay fa sasao amin’ilay rànao soa izahay satria ao Aminao irery ihany no misy ny famonjena sy ny famelan-keloka. Sasao madio izahay ho afa-keloka ary diovy izahay mba ho afa-pahotana. Koa ekeo re ny fifonanay ho hanitra hankasitrahinao eo andapan’ny fahamarinanao. Noho ny famindramponao sy ny fitiavanao anay, Tompo ô no angatahinay izany. Tononina sy ataonay izany vavaka izany amin’ny Anaran’i Jesoa Kristy Tompo sy Mpamonjy anay. Amen.
Notononina teo am-pitsanganana ny fanekem-pinoana nikeanina (Laharana 2). Nisy feon-javamaneno fohy.
Ny Mpitantsoratry amin’ ny Biraom-Piangonana Rakotomanana Andrimbazotiana no namaky ny vaovao. Ny andinin-tSoratra Masina nanombohany izany dia ao amin’ny Jaona 3 : 17 : “ Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin’izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao ”. Toy izao ny asa tsara fantarina ary hotanterahin’ny Fiangonana sy hentiny amim-bavaka :
Sabotsy 19 martsa 2022 amin’ny 11 ora antoandro ao amin’ny FJKM Isotry Fitiavana : fotoana hankalazana ny faha 45 taona naha-mpamoron-kira an-dRakotonirina Jean de Dieu ao amin’ny Ampifitia.
23-25 martsa 2022 ny sampanasa Asa Fitoriana ny Filazantsara (AFF) Synodamparitany Antananarivo Andrefana (SPAA 10) dia hanao lasy fiofanana any Amoron’ Irihatra (7 km miala an’ Arivonimamo), ao amin’ny Foibe AFF ny fisoratana anarana sy any amin’ny SPAA 10.
Hanomboka rahampitso 14 martsa 2022 ny herinandrom-bokatry ny Sampana Taninketsa.
Sabotsy 19 martsa 2022 amin’ny 8 ora maraina: fivorian’ny mpihevi-draharaha.
Sabotsy 19 martsa 2022 amin’ny 9 ora : Fivoriambe voalohan’ny Sampana Vokovoko Manga.
Sabotsy 26 martsa 2022 amin’ny 2 ora sy sasany tolakandro : famelabelaran-kevitra hotarihin-dRakotoarivony Hubert, lohahevitra : “ Ny Fiangonana manoloana ny LGBT “.
Alahady 20 martsa 2022 tolakandro : Jazz fiderana hiarahana amin’ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno (SMZM) sy ny Cercle Germano-Malagasy (CGM).
Fitoriana any an-tokantrano (Fitoantoka) amin’ny endriny vaovao : hisy ny fifandraisana amin’ny alalan’ny antso an-tariby, ny dinika, isika rehetra no hanatanterahana izany mandritra ity taona ity ho fitoriana sy fampaherezana (édification). Ny AFF sy ny Vaomieran’ny Fifandraisana dia mandray ny mombamomba ny Mpiangona.
Oktobra 2022: fiofanan’ny tomponandraikitra andiany faharoa.
Nandray fitenenana ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina niarahaba ny Fiangonana, nisaotra ny tomponanjara, nanamafy ny firariantsoa ny evanjelistra sy nanentana amin’ny rakitra am-baravarana. Nisy koa ny antso ho an’ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo manana fikasana handalina ny Soratra Masina ao amin’ny SETELA SY FITELA sy hanao fanadinana ao amin’ny toeram-panomanana Mpitandrina. Apetraka amin’Andriamanitra, hoy izy, ny asan’ny Fiangonana kasaina amin’ity taona ity.
Natao ny hira FFPM 245 : 3 « Ray ô! Asehoinao » nandritra ny firosoan’ny ray aman-dreny sy zaza teo amin’ny alitara. Nisy Teny avy ao amin’ny Soratra Masina sy vavaka teo am-pitsanganana. Randrianarison Ilon’Ny Aina Andriantsoa no zaza natolotra. Nisy tsodrano. Nitohy tamin’ny voady ny fotoana.
Ny Biraom-piangonana Andriamasinoro Tantely no namaky ny voady rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Salamo 5 : 7 : “ Fa izaho kosa noho ny haben’ny famindram-ponao dia hiditra ao an-tranonao ; hiankohoka manatrika ny lapanao masina amin’ny fahatahorana Anao aho ”. Ny hetahetan’ny mpianakavin’ny finoana nentina teo anivon’ny Fiangonana : renim-pianakaviana handeha lavitry ny ankohonany, mangata-bavaka tsy ho azon’ny fakampanahy, ho an’ny famitana trano sy fanohizana ny fianaran’ny ankizy. Tovovavy nahazo fahasoavana nandritra ny taona na dia nandalo ny mafy aza, mangata-bavaka mba hahazo hery hiatrehany ny adidiny. Ny hira nangatahin’ireo mpianakavin’ny finoana ireo, izay nohirain’ny Fiangonana nandritra ny fanantazana ny rakitra dia FF 32 : 1 “ Aza avela hahalala ”.
Ny hira vavaka FFPM 4 : 4 “ Mamy ny Fitianao ”no notanterahina teo am-pitsanganana ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana fanolorantena.
Nisaotra izy noho ny hafatra : Andriamanitra marina, masina, Fitiavana maneho ireo toetra ireo amin’ny olona, Andriamanitra tsy tia ratsy, tsy tia lainga, mamaly ny tsirairay amin’ny asany. Notononina ny Fiangonana, Mpitondra Fiangonana, Mpitory Filazantsara mba hiverina amin’ Andriamanitra, hiala amin’ny ratsy, ho velona, ho vita ireo andraikitra. Nentina amim-bavaka koa ny toby masina rehetra, ny akany fitaizana, ny foibe FJKM isan’ambaratongany sy ny mpandraharaha, ny synodamparitany manerana an’i Madagasikara indrindra ny SPAA10 hahavita ny asany, ho lohany mandrakariva amin’ny fijoroana vavolombelona, eo koa ny Antananarivo Renivohitra sy ny Manodidina (ARM).
Voatonona ny kristiana rehetra eto amin’ny Fitandremana, na ireo tonga sy ny tsy afaka noho ny antony samihafa, efa miverina ny fitiavana miara-miombona fa iriana hitombo sy hivelatra, hiverina ny hafanampo. Eo ny zanaka ampielezana na aiza ny misy azy. Ny Mpitandrina evanjelistra nitory Teny sy ny ankohonany, ny asa fanompoany dia nentina teo amin’ny Tompo, toy ny nitondrana ny asan’ny Fiangonana voafaritra araka ny tondrozotra ; ny rafitra manatanteraka fankalazana amin’ity taona ity ; ny hiditra SETELA sy FITELA, hanao fanadinana ho Mpitandrina fa harena sarobidy ny manana olona maro afaka mitory sy mampianatra. Tsy diso anjara ny sahirana, marary, mana-manjo, traboina, very asa, tsy manan-kialofana, kere, indrindra taorian’ny rivo-doza, mba hitahiry ny finoany izy ireny sy hitodika amin’ Andriamanitra. Misy ireo manana hataka manokana ; ny nanao raki-pisaorana ; ny manana voady anaty mba samy handray ny valim-bavaka tandrify azy avy. Nofaranana tamin’ny « Rainay izany any an-danitra » ny vavaka.
Natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 625 “ Mpamonjy soa malala ô ”. Notononina ny tondrozotra 2022 hoe : “ Mifankatiava araka ny fifankatiavan’ny mpirahalahy, mitariha lalana amin’ny fifanomezam-boninahitra, araka ny olom-boafidin’ Andriamanitra sady masina no malala… Samia misikina fanetren-tena ianareo ka mifanompoa ; fa Andriamanitra manohitra ny miavonavona, fa manome fahasoavana ho an’ny manetry tena. ” Romana 12 : 10 ; Kolosiana 3 : 12b ; Petera voalohany 5 : 5b.
Natolotra ny tsodrano dia noredonina ny hira vavaka FFPM 338 “ Arovy aho, Tompo ”. Nisy vavaka mangina sy trinite ary feon-javamaneno. Nifarana tamin’ny 10 ora sy 52 minitra ny fotoana. Nitohy tamin’ny asa sy fampaherezana izany. Nisy rakitra am-bavaravarana ho fanohanana ny evanjelistra amin’ny asany.
Nitendry orga : Rabiazamaholy Mahery sy Randriambeloson Sitraka
Nikirakira ny fafana : Raoliarizaka Bakoly sy Randriamasimanana Andrianavalona